လိုချင်ရင် ပြန်တော့ပေးရတယ် - Dr Mg Nyo [အပြာစာပေ]
” ကိုကိုရေ .. မေမေတို့လာတယ် .. မြန်မြန်ထွက်ကြိုပါဦး ”
ကျနော် ကမန်းကတမ်းပြေးထွက်ကြည့်တော့ အိမ်ရှေ့မှာ ကျနော့်မိဘနှစ်ပါး အထုပ်အပိုးတွေနဲ့ရောက်နေတယ် ။
” ဟာ အမေတို့ .. အကြောင်းမကြားဘာမကြားနဲ့ ဘာတွေများအရေးကြီးလာလို့လဲ ”
” အမေတို့မှာ ဒီသားလေးပဲရှိတာ .. လွမ်းလို့ လာတာပေါ့သားရဲ့ .. လာလာ အထုပ်တွေလာဆွဲ အထဲရောက်မှ စကားပြောမယ်”
ကျနော်လဲ အထုပ်တွေ ပြေးဆွဲရတော့တာပေါ့ .. အထဲလဲရောက်ရော အမေက
“သမီး မေသန္တာ .. သွား ငါတို့အထုပ်တွေ အခန်းထဲထည့်ပေးဦး .. အမေ့သားနဲ့ စကားပြောလိုက်ဦးမယ်”
အမေက ကျနော့်မိန်းမကို ခပ်တင်းတင်းပဲ လှမ်းပြောတယ် .. အမေက ကျနော့်မိန်းမကို အမြင်မကြည်သလိုလိုပါလား .. အော် စိတ်ထင်လို့နေမှာပါလေ
” အမေရယ် နားလိုက်ပါဦး .. ခုမှရောက်တာကို .. သားနေ့လည် ပြန်လာခဲ့မယ် ဒီနေ့အရေးကြီးဧည့်သည်နဲ့ တွေ့စရာရှိလို့ ခနသွားရဦးမယ် အမေ ”
” ဟင် .. အလုပ်ကိစ္စလား .. ငါ့သားအလုပ်မှာ ဘယ်လိုနေလဲ အမေလိုက်ကြည့်ချင်လိုက်တာ .. အမေလိုက်ခဲ့မယ် သားရေ ”
” ရှင်ရော လိုက်ဦးမလား ”
” တော်ပါပြီ မိန်းမရာ .. ငါပင်ပန်းလို့အိမ်မှာပဲ နားနေခဲ့တော့မယ် ”
အဖေက အိမ်မှာပဲနားနေမယ်ဆိုပေမယ့် အမေကတော့ အဝတ်တောင်သွားလဲနေလေပြီ .. ။ ကျနော်လဲ ပြောရမှာမဟုတ်တော့ ခေါ်သွားရုံသာ .. ။ အမေ့ကိုလဲ အလုပ်ဆီ လိုက်ပြလို့ရတာပေါ့ .. ။ အမေ အဝတ်လဲပြီးထွက်လာတော့
” ကဲ သွားစို့ သား ”
” မိန်းမ .. အဖေ့ကို တခုခုကြွေးထားဦးနော် .. နေ့လည်မှ ပြန်လာတော့မယ် ”
“စိတ်ချပါ ကိုကိုရဲ့ .. ဖေဖေ့ကို အငတ်မထားပါဘူး”
တဲ့ ပြောပြီးတော့ အဖေနဲ့ မေသန္တာနဲ့က ပြိုင်တူရယ်မောနေကြတယ် .. ကျနော်လဲ နားမလည်သလိုလို .. ဘာမှတွေးမနေတော့ပဲ ကားမောင်းပြီးသာ ထွက်လာခဲ့လိုက်တယ် ကားပေါ်မှာ အမေကတော့ စထွက်ထဲက ဘေးမှာ ခွေခွေလေးမှေးရင်းပါလာတယ် .. ။ ကျနော့်အိမ်က အနီးစခန်းမှာဆိုတော့ ပြင်ဦးလွင်နဲ့ နည်းနည်းတော့ မောင်းရသည် .. ။ အမေ့ကို တချက်ကြည့်ရင်း အတွေးတွေက ခေါင်းထဲဝင်လာတော့တယ် .. ။
ကျနော် အိမ်ထောင်ကျတာ ၁ နှစ်ကျော်ခန့်ရှိပြီ ။ ကျနော့်အသက်က ၂၃နှစ် .. ။ ကျနော့်မိန်းမ မေသန္တာကတော့ အခုမှ ၁၈ နှစ်သာရှိသေးသည် ။ ပြောရရင် ရှက်စရာ .. ကျနော်က ရည်းစားတွေဘာတွေသိပ်မထားတတ်တဲ့သူ .. ။ ရန်ကုန်မှာ အဝေးသင်တက်ရင်း အလုပ်လာရှာတဲ့ မေသန္တာနဲ့ တွေ့တော့ ညှိကြရာကနေ မစားစဖူး အရူးဖြစ်ဆိုသလို သွက်သွက်လက်လက် လည်လည်ဝယ်ဝယ် မေသန္တာရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ ခိုးပြေးကြပါရောဗျာ .. ။
ကျနော်တို့ ရတော့ မေသန္တာမှာ ၁၆ နှစ်ကျော်သာ ရှိသေးသည် .. ဆယ်တန်းအောင်ခါစ .. ။ အမေတို့ကတော့ စိတ်တိုတာပေါ့ .. အသိုင်းအဝိုင်းကလဲ လက်မခံတဲ့အဆုံး လက်ထပ်အပြီး အမေ့ငယ်မျိုးတွေရှိရာ ပြင်ဦးလွင်မှာ အမေက အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်လုပ်ငန်းတစ်ခု ထူထောင်ပေးပြီး အဝေးပို့ခဲ့သည် .. ။ မေသန္တာကို အိမ်မှာပင် အထည်ဆိုင်လေးဖွင့်ပေးပြီး အရောင်းကောင်မလေးတယောက်နှင့် အဖော်ရအောင် ထားခဲ့ပြီး ကျနော်က နေ့လည်ဆို ပြင်ဦးလွင်က ရုံးမှာသာ သွားနေရတယ်လေ ။
မေသန္တာ .. ။ ကျနော့်မိန်းမက မယူခင်က ၁၆ နှစ်ကျော်သာဆိုတယ် ခန္ဓာကိုယ်က တော်တော်တောင့်တယ် .. ။ ဆံပင် မကောက်တကောက်နဲ့ ပုခုံးကျော်ကျော်လောက်ပုံစံက သူကိတ်ပုံနဲ့တော့ တော်တော်လေးကို ကြည့်ကောင်းတယ် .. ။
ကျနော်လဲ အတွေးတွေနယ်ချဲ့ရင်း မြို့ထဲရောက်လာမှ ကားကိုပဲ အာရုံစိုက် မောင်းလာလိုက်တော့တယ် .. ။ မေမေကတော့ ဘေးမှာခွေခွေလေးအိပ်လို့ .. ။ ရုံးရောက်တော့ အမေ့ကို နှိုးမလို့လုပ်တော့ အမေခွေခွေလေး အိပ်နေတာကို သနားပြီး မနှိုးရက်တော့ .. ။ အလုပ်ကိုမြန်မြန်ဖြတ်ပြီး အိမ်မြန်မြန်ပြန်မည်ဟုသာတွေးရင်း ကားပေါ်ကဆင်းလာတယ် .. ။ ရုံးထဲဝင်တာနဲ့ ရုံးကစာရေးလေးက
” အကိုရေ ဖုန်းဆက်နေတာ မရဘူးဗျာ .. ချိန်းထားတဲ့ မြေရှင်တွေက ဒီနေ့မလာနိုင်ဘူးတဲ့ မနက်ဖြန်မှ လာမယ်တဲ့ ”
” ဟုတ်လား .. အေးအေး ကောင်းတာပေါ့ .. ငါလဲ အမေတို့ ရောက်နေတာနဲ့ အတော်ပဲ .. အစ်ကို ဒီနေ့ပြန်ပြီကွာ .. ပွဲစားတွေလာလည်း ပြန်လွှတ်လိုက်တော့ .. အလုပ်ကိစ္စတွေ မနက်ဖန်သာ ရွှေ့ထားလိုက်တော့ကွာ ”
” ဟုတ် ဟုတ် .. အစ်ကို စိတ်ချပီး ဖြေးဖြေးသာ ပြန်ပါ ”
ကျနော်လဲ ပြောပြီး ကားဆီပြန်လာတယ် .. ဟူးး လာတာပဲ အဖတ်တင်သွားတယ် .. အမေအိပ်ချင်နေရှာတာ အိမ်ပဲပြန်မှပါ ဆိုပီး ကားတံခါးဖွင့်ပီးဝင်ထိုင်တယ်.. ။ ပီးတော့ အမေ့ကို အမှတ်မထင် လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ ” ဟင် ” အမေ့ထမိန်က လျော့လျော့လေး ကျွတ်နေပါလား .. ။ အမေ့ခင်မျာ ကားပေါ်ခွေခွေလေးအိပ်နေရရှာတော့ ပြေပြီးကျွတ်သွားတာနေမှာ .. ။ ကားမောင်းရမှာလဲ ကြာဦးမှာဆိုတော့ မတော်လို့ ဒီထက်ကျွတ်သွားရင် မြင်မကောင်း .. ။ ကျနော်တွေးလိုက်ပြီး အသာအယာ ဖွဖွလေး အမေ့ထမိန်ကို ပြန်ဝတ်ပေးဖို့ကိုင်လိုက်သည် .. ။
အနီရောင်လေး … ။ ဟုတ်သည် .. အမေ့ထမိန်စလေးကို ကိုင်လိုက်သည် ဆိုရင်ပဲ အနီရောင်လေးကို ဖြတ်ခနဲ တွေ့လိုက်ရသည် .. ။ ကျနော် ရင်တွေထိတ်ခနဲ ခုန်ထွက်သွားသည် .. ။ အမေ့အတွင်းခံလေးက အနီရောင်လေး .. ။ ကျနော် အမေများ သိသွားသလားလန့်ပြီး အမေ့ကိုကြည့်တော့ အိပ်မောကျနေသလိုပင် .. အသက်ရှူသံလေးပင်ကြားနေရသည် .. ။ ကျနော်လဲ ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့ အရဲစွန့်ပြီး အမေ့ထမိန်ကို နည်းနည်းထပ်လှန်လိုက်သည် .. ။
အမေ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီ တစ်ခုလုံးပေါ်လာလေသည် .. ။ အလယ်မှာ ပန်းပွင့်ရုပ်လေးနဲ့ အနီရောင်အတွင်းခံလေးကို အမေဝတ်ထားသည် .. ။ ကျနော့်ရင်ခုန်သံတွေက နှလုံးအပြင်ဘက်ထိ ပေါက်ထွက်တော့မယောင်ပင် .. ။ ပိုအရဲတင်းလာပြီး အမေ့ပေါင်လေးတွေပါ ပေါ်အောင် ထပ်လှန်လိုက်သည် .. ။ လှလိုက်တဲ့ ပေါင်လေးးတွေ .. ဖွေးဖြူနေတဲ့ပေါင်တံလေးတွေက အတွင်းခံအနီရောင်လေးနဲ့ လိုက်ဖက်လွန်းလှသည် .. ။
ဟာ ငါ ဘာတွေလုပ်နေမိတာလဲ … သတိဝင်လာပြီး ချက်ချင်း အမေ့ထမိန်ကို ကောက်ပတ်ပေးလိုက်ရတယ် .. ။ အမေကတော့ အိပ်မောကျနေတုန်း .. ။ ရှက်လိုက်တာ ဘယ်သူမှမသိလို့ တော်သေးတာပေါ့ .. ။ ရုံးဝင်းထဲကနေ ကားကို မြန်မြန်မောင်းထွက်လိုက်တယ် .. ။ ဒီတခါလဲ ကားမောင်းရင်း အတွေးပေါင်းများစွာ ထပ်ဝင်လာရပြန်တယ် .. ။
ကျနော့်အမေ … ။ အမေနဲ့ အဖေ ညားတော့ အမေက ၁၈ .. အဖေက ၂၁ သာသာရယ် .. ။ သူတို့လဲကျောင်းတက်ရင်း ဖူးစာစုံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် .. ။ အဖေက ရည်းစားရှိသည် .. အမေ့ကို လိမ်ပြီးအပျော်တွဲရင်း အလည်လွန်ရာကနေ ကိုယ်ဝန်ရလို့ ယူလိုက်ကြခြင်းဖြစ်သည် .. ။ အခုတော့ အမေက အသက် ၄၁ .. အဖေက အသက် ၄၄ .. ။ နှစ်ယောက်လုံးအရွယ်တင်တုန်းပင် .. ။ ပြောမယ့်သာပြောရတာ အမေက ၄၁ မထင်ရ ၃၆ ၃၇ လောက်သာထင်ရတယ် .. နှိုင်းပြောရရင် အမေက မင်းသမီး ခင်ဇာခြည်ကျော်လို ပုံစံမျိုး … အသားဖြူဖြူ ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တောင့် အရပ်ကတော့သိပ်မရှည် .. ရုပ်ရည်ကလဲ ဆွဲမက်ဖွယ်ရာ sexy မကျတကျပုံမျိုးရှိသည် .. ။
ကျနော့်မိန်းမ မေသန္တာကတော့ အသားညိုညို အရိုးအဆစ်ကြီးကြီး နှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ အမေ့ထက်ကို ပိုတောင့်သည် .. ။ မသိရင် အလုပ်ကြမ်းအလုပ်သမ တစ်ယောက်လို ညိုညိုတုတ်တုတ်ဖြစ်သည် .. ။ အော် .. ငါ့နှယ် အမေနဲ့ မိန်းမနဲ့ကို ယှဉ်မိနေပါလားဟ ဆိုပီး တစ်ယောက်ထဲ ကျိတ်ပြုံးမိတယ် .. ။
” သား ဘာတွေပြုံးနေတာလဲ ”
” အမေ့အကြောင်း .. အဲလေ ဟို ဟို မိန်းမအကြောင်း အဲ ဘာ ဘာမှမဟုတ်ပါဘူး အမေ ဟီး ”
” ဟင်းးနော် သားး ”
တဲ့ အမေက မျက်စောင်းလေးထိုးတယ် .. ။ ကျနော်ဗျာ ရင်တွေကို ဗလောင်ဆူနေတာပဲ လူပျိုပေါက်လေး ရည်းစားချိန်းတွေ့နေရသလိုပဲ .. ။
” သား အိမ်ပြန်နေတာလား .. ခနလမ်း ဘေးရပ်လိုက်ဦး .. အမေပြောစရာရှိလို့ ”
ကားကို လမ်းဘေးထိုးလိုက်တော့ အမေက
” သားး သားစိတ်ကိုသား ထိန်းပြီး အမေပြောတာနားထောင်နော် ”
ကျနော် နဲနဲလန့်သွားတယ် .. ။ အမေကပဲ ဆက်ပြီး ..
” သား မင်းအဖေ online ပေါ်ကနေ မိန်းမရှုပ်နေတယ် သား .. အမေတို့ လာခဲ့တာ အဲဒါကြောင့်ပဲ ”
” ဟင် .. အဖေကလဲဗျာ ဒီအရွယ်ရောက်မှ ”
” သား မင်းစိတ်ကို ထပ်ပြီး ငြိမ်အောင်ထားဦး .. အဖေနဲ့ ရှုပ်နေတာ ဘယ်သူလို့ထင်လဲ ”
” ဘယ်သူလဲဟင် အမေ .. သားတို့ အသိထဲကပဲလား ”
” သိရုံကိုမဟုတ်ဘူး သား .. မင်းအဖေနဲ့ online ပေါ်မှာရှုပ်နေတာ သူ့ချွေးမ မေသန္တာ .. မင်းမိန်းမနဲ့ပဲ သား”
“ဟာ … ”
ကျနော် မျက်လုံးတွေ ပြာသွားသည် .. ။ ကိုယ့်နားပင် ကိုယ်မယုံနိုင် .. ။ ဘယ်လို .. ဘယ်လိုတွေလဲ .. အိပ်မက်များလား .. ခေါင်းတွေ ချာချာရမ်းသွားရလေပြီ .. ။
” သား မှတ်မိလား .. ဟိုးအရင် သုံးလလောက်က သားနဲ့ မေသန္တာ ညကြီး စကားတွေ များကြတာလေ .. သားက စကားများပြီးတော့ သူငယ်ချင်းအိမ်ထွက်အိပ်တယ် ဆိုတာလေ ”
မှတ်မိလိုက်ပြီ .. ။ အဲဒီနေ့က ကျနော် အိမ်ထောင်သက် တစ်နှစ်ပြည့် .. ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျနော် အဲဒီနေ့က ကားပျက်နေတာနဲ့ ဆိုင်ကယ်နဲ့အလုပ်သွားရတယ် .. ကံကပဲ ထပ်ဆိုးသလားပဲ အဲဒီနေ့က အသွားမှာ မိုးမိရောဗျာ .. ။ ရုံးရောက်မှ ရုံးကကောင်လေးဆီက အင်္ကျီငှါးဝတ်ပီးနေနေရတယ် .. တကိုယ်လုံးလဲ ညောင်းကိုက်လို့ .. ။
ညနေအိမ်ပြန်ရောက်တော့ မေသန္တာက အလှဆုံးပြင်ဆင်ထားပြီး ညဝတ် ပိုးဂါဝန်လေးနဲ့ စောင့်နေတယ် .. ။ ကျနော်လဲ အိမ်ရောက်တော့ မဟန်နိုင်တော့ဘူး .. ဘယ်လိုမှ တောင့်မခံနိုင်ပဲ စောင်ခြုံပီးကွေးရတော့တာပဲ .. ။ အဲဒီမှာ မေသန္တာက သူပြင်ဆင်ထားသလိုမဖြစ်ရလို့ ထပေါက်ကွဲတာ .. စကားတွေများကြပြီး ကျနော်လဲ သူငယ်ချင်းအိမ်ထွက်အိပ်လိုက်ရတယ် .. ။
” အဲနေ့က အမေ့ဆီ မင်းမိန်းမ ဖုန်းဆက်တယ် သား .. အမေက အိပ်ယာထဲမှာ .. အမေက အစထဲက သားတို့ကို သဘောမှ မတူတာ .. ဒါပေမယ့် အဲနေ့က ချော့မော့ပေးလိုက်ပြီးမှ အမေ အိပ်လိုက်တာပါ ”
” အဖေနဲ့က ဘယ်လို တွေ့တာလဲ .. သား သိချင်လှပြီ ”
” အဲနေ့က အမေ့ဆီ ဆက်ပီးတော့ မင်းအဖေဆီ သူဆက်တယ် .. မင်းအဖေက ဘောလုံးပွဲ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ကြည့်နေတာ .. အဲဒီမှာ ငိုယိုပြီး တိုင်တာ မင်းအဖေက နှစ်သိမ့်တာတဲ့ နောက်မှ အမေလက်ပူးလက်ကြပ်မိမှ မင်းအဖေ အကုန်ရှင်းပြတာ ”
” မင်းအဖေက ပြောတယ် .. အဲနေ့က မေသန္တာက ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် သားနဲ့ ဆက်ဆံချင်နေတာ .. သားက လုပ်မပေးနိုင်တော့ နောက်မိန်းမတွေ ရှိနေလို့နေမှာ ဘာညာနဲ့ မင်းအဖေကို ငိုပြီးတိုင်တယ် .. မင်းအဖေက နှစ်သိမ့်နေရင်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ သမီး လို့မေးတော့ သမီးပြောမထွက်ဘူး ဖေဖေ ဆိုပြီး fb chat box မှာပြောပြမယ်တဲ့ ”
” အဲဒီ chat box မှာပြောကြတာတွေ ခုနောက်ပိုင်း မိသွားတော့ မင်းအဖေက ပြတယ် .. အမေ အဲဒါတွေကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတယ် သားကိုပြမယ် ”
အမေ့ဖုန်းထဲက ပုံလေးတွေထုတ်ပြတယ် .. ဟင် .. ကျနော် ဖတ်ရင်းနဲ့ အံကြိတ်ထားမိတယ် .. လုပ်ရက်လိုက်ကြတာဗျာ .. ။ မေသန္တာက သူ့ဂါဝန်လေးနဲ့ ပုံကို ရိုက်ပြပို့ထားတယ် အဖေ့ဆီကို .. ပီးတော့
မေသန္တာ : ” တွေ့လား ဖေဖေ .. သမီး ဒီလိုပြင်ထားတာတောင် ဖေဖေ့သားက ဂရုမစိုက်ဘူး .. သမီးက သူနောက်ထပ် တွေ့တဲ့ မိန်းမတွေလောက် မလှလို့နေမှာ ”
အဖေ : ” လှပါတယ် သမီးရယ် .. အဖေ့သားက ဒါမျိုး မကြိုက်လို့နေမှာပါ နောက်တခါ သမီးက ဒိထက်လှအောင် နေပြလိုက်လေ ”
မေသန္တာ : ” အဖေရယ် ဒီထက်လန်းအောင် နေရရင် သမီး ကိုယ်တုံးလုံးနေရုံပဲ ရှိတော့မယ် .. အခုတောင် ဒီဂါဝန်ကလွဲလို့ ဘာမှတောင် မဝတ်ထားဘူး”
ဟင် .. သူတို့ပြောနေတာ ရှင်းရှင်းကြီးတွေ .. မေသန္တာက အသက်ကလဲငယ် .. စိတ်လဲဆိုးနေတဲ့အချိန် .. အဖေ့ကိုနွဲ့ပီးတိုင်ချင်တာလဲပါတော့ သူပြောနေပုံက ညုတုတုဖြစ်နေသည် .. ။ အဖေကတော့ အလိုက်သင့်ဝင်လျောနေပုံပဲ .. ။
အဖေ : ” ဒါဆိုလဲ သမီးရယ် .. ဘာမှမဝတ်ပဲ နေလိုက်ပေါ့ .. ဒါဆို အဖေ့သားကျော်ကျော်လဲ ဘယ်ခံနိုင်ပါတော့မလဲ ”
မေသန္တာ : ” သမီးက အဲလိုနေလဲ မလှပါဘူးဆို ဖေဖေကလဲ .. ”
အဖေ : ” အော် .. ဖေဖေ့ချွေးမ ဘယ်လောက်လှလဲ ဖေဖေ သိတာပေါ့ .. တကယ် လှပါတယ်ဆို သမီးရယ် ”
မေသန္တာ : ” ဖေဖေက မယုံဘူးပေါ့ ဟွန်းးး ပြမယ် ”
ဆိုပြီး ဆယ်ဖီစတစ်လေးနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံလေး အဖေ့ဆီ ပို့ပေးထားတယ် .. ။ လုံးဝ sexy .. တကိုယ်လုံး မိမွေးတိုင်း .. ပေါင်လေးတွေစင်းပြီး အိပ်ရာပေါ်မှာ တစောင်းလေးနဲ့ လက်တဖက်က နို့သီးလေးတွေကို အုပ်ထားတယ် … ။ ဟားးး ဒါ ယောက္ခထီးကို ပို့စရာလား .. ။
မေသန္တာ : ” ကဲ တွေ့ပြီလား ဖေဖေ .. သမီးက ဆွဲဆောင်မှုမရှိဘူးမလား .. အဲဒါကြောင့်ဖေဖေ့သားက ဂရုမစိုက်တာ ”
အဖေ : ” ဟင်းးး လှလိုက်တာ ချွေးမလေးရယ် .. ဖေဖေ့သား မပြောနဲ့ ဖေဖေတောင် မနေနိုင်ဘူး .. ဒီလောက် လှနေတာကို ”
မေသန္တာ : ” သွားပါ အပိုတွေ .. ဖေဖေက အကျင့်ပုတ်ကြီး .. သူ့သားကိုဖြင့် ဂရုစိုက်အောင် ပြောမပေးပဲနဲ့ ”
အဖေ : ” သားက ဂရုမစိုက်ပေမယ့် ဖေဖေက ဂရုစိုက်လို့ စကားပြောနေတာပေါ့ သမီးရယ် ”
မေသန္တာ : ” ဟွန်းး ဖေဖေကဖြင့် ပြီးရင် မေမေ့ဆီသွားပီး ဂရုစိုက်ပေးမှာ .. သိသားပဲ .. သမီးက ဖေဖေ့ချွေးမပဲဟာ ဖေဖေ့ မိန်းမလောက်တော့ ဘယ်ဂရုစိုက်မလဲ ”
အဖေ : ” တကယ်ပါဆိုကွယ် .. ဒီည သမီးကိုပဲ အဖော်လုပ်ပေးမယ် .. ဖေဖေ့ မိန်းမဆီ မသွားဘူး ဟုတ်ပြီလား ”
မေသန္တာ : ” ဟုတ်တယ် .. ဖေဖေ့သားအစား ဖေဖေက သမီးကို စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးရမှာပေါ့ ဟဲ ဟဲ ”
အဖေ : ” ဖေဖေ့ချွေးမလေး စိတ်ကျေနပ်အောင် လုပ်ပေးချင်တာပေါ့ကွယ် .. ခက်တာက ဖေဖေက အနီးနားမှာမှ မရှိတာ .. အနားမှာသာရှိရင် … ”
မေသန္တာ : ” ဟာ … သွားး ဖေဖေနှာဘူးကြီး .. ကိုယ့်ချွေးမကိုတောင် ပစ်မှားနေတာပေါ့လေ .. သမီးက အော်လိုက်မှာပေါ့ ”
အဖေ : ” အော်ရင် ဖေဖေက သမီးပါးစပ်လေးကို ဟောဒါကြီးနဲ့ ပိတ်ပေးမှာပေါ့ကွယ် ”
အဖေက သူ့လီးပုံ ပို့လိုက်တယ် … ဟာ တိုတိုတုတ်တုတ်ကြီး တော်တော်ကြီးကို ကြီးတယ် .. ဒါပေမယ့် တိုတော့ တိုလွန်းတယ် .. ။ မေမေ့မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မေမေက ရှက်သွေးတွေနီရဲပြီး မျက်နှာလွှဲသွားတယ် ။
မေသန္တာ : ” ဟယ် ဖေဖေနော် .. ရှင့်ဟာကြီးက အကြီးကြီးပဲ သမီးနဲ့ ဆံ့ပါ့မလားရှင့် .. ရှင့်သားက အဲလောက်မတုတ်ဘူး .. ရှည်တော့ အရှည်ကြီးပဲ ”
အဖေ : ” ဆံမဆံ့ ကြည့်မယ်လေ .. သမီးအဖုတ်လေး ပြကြည့်ပါလား ”
မေသန္တာ : ” ရှင်ကြီးနော် ဘာအဖုတ်လဲ .. သမီးကို ရှင်ကြီးမိန်းမ မှတ်နေလား .. ဖေဖေ့ရဲ့ချွေးမရှင့် ”
ပြောလဲ ပြော ပုံလဲပို့တယ် .. ။ သူ့အဖုတ်လေးကို လက်လေးနဲ့ဖြဲပီး ရိုက်ထားတာ .. ။ တောက် .. ရိုင်းလိုက်တဲ့ မိန်းမကွာ .. ။ စိတ်တွေလဲတို .. စိတ်တွေလဲပါ နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နေတယ် .. ။ အဲဒါပြီးတော့ video call 15 minutes ကြာတယ် သူတို့ပြောထားကြတာ .. ။
အဲဒါတွေကြည့်ပြီး ကျနော် မနေနိုင်တော့ဘူး .. ။ ချက်ချင်းအိမ်ကို ဒုန်းမောင်းလာတယ် .. အိမ်ရောက်တော့ ခြံထဲကို ကားမောင်းမဝင်ပဲ ခြံဝမှာ ရပ်ပြီး လမ်းလျှောက် ဝင်ခဲ့လိုက်ကြတယ်။
အိမ်ထဲရောက်တော့ အမေနဲ့ကျနော် တိတ်တိတ်လေး အပေါ်ထပ်က အမေတို့အတွက် ပြင်ထားတဲ့အခန်းဆီ တက်လာလိုက်တယ် .. ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ အခန်းထဲက ကုတင်ပေါ်မှာ မေသန္တာနဲ့ အဖေနမ်းရှုပ်ရင်း စကားပြောနေသံ ကြားလိုက်ရတယ် .. ။ ကျနော်လဲ အမေ့ကို ဘေးခန်းမှာ ခနထားပြီး ကင်မရာလေးနဲ့ laptop ပါယူပြီး အဖေတို့ အခန်းဝပြူတင်းကနေ ကင်မရာ ကို ထောင်ပီး laptop နဲ့ချိတ်လိုက်တယ် .. ။ အသံတွေကတော့ ဒီဘက်ခန်းကနေကို ကြားနေရတယ် .. ။ laptop ကို အိပ်ယာပေါ်တင်ပြီး အမေနဲ့ကျနော် သက်သေယူရင်း ကြည့်နေလိုက်တယ် .. ။
Laptop ပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ မြင်ကွင်းက အဖေနဲ့ ကျနော့်မိန်းမ အိမ်မှာဘယ်သူမှ မရှိဘူးထင်ပြီး အသံကျယ်ကျယ်နဲ့ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်နေကြတယ် .. ။
” အား ကောင်းလိုက်တာ ဖေဖေရယ် .. သမီးအဖုတ်တစ်ခုလုံးကို ယက်ပေးစမ်းပါ အားး ”
မေသန္တာက အဖေ့မျက်နှာပေါ်တက်လို့ သူ့အဖုတ်နဲ့ပွတ်နေလေတယ် .. ။ အမေကတော့ကြည့်ရင်း အံတွေကျိတ်လို့ .. ။ ခနနေတော့ မေသန္တာက ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်လေးလှန်ပြီး အလိုးခံဖို့ ပြင်နေလေပြီ .. ။
” ယောက်ျားး ဖြေးဖြေးနော် သမီး အဖုတ်ကွဲလိမ့်မယ် .. ကိုကို့လီးက ရှည်ပေမယ့် ဖေဖေယောက်ျားလီးလောက် မတုတ်ဘူး ”
” ဖေဖေ့ မိန်းမလေးကို နာအောင် လုပ်ပါ့မလားကွယ် ”
ပြောရင်းနဲ့ ထိုးထည့်လိုက်တယ် ..
” အားးး နာတယ် သေပါပြီ သမီးအဖုတ်ကြီး ကွဲပါပြီ ဖေဖေရဲ့ ”
မေသန္တာ တွန့်လိမ်သွားတယ် … ။ အမေ ကြည့်ရင်း မျက်ရည်တွေဝဲလို့ .. ။
” အားး နာတယ် ကောင်းလဲကောင်းတယ် .. ရှင်ကြီးမိန်းမနဲ့ သမီးနဲ့ ဘယ်သူ့ကို ပိုလိုးလို့ကောင်းလဲ ဖေဖေရဲ့ အားးရှီးး ”
” နှိုင်းစရာလားကွာ .. ဒီလို အဖုတ်နုနုလေးက ပိုကောင်းတာပေါ့ ချွေးမလေးရဲ့ အားး ”
မေမေ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်တစက် ပေါက်ခနဲကျလာတယ် .. ။ ကျနော် အရမ်းသနားတာပဲ မေမေရယ် .. ။ ကျနော့်မိန်းမနဲ့ အဖေနဲ့ လိုးနေတာကြည့်ရင်း ကျနော်လဲ တအားစိတ်ပါနေပြီ .. ။ ကျနော် ဘယ်လိုမှ စိတ်မထိန်းနိုင်တော့ပဲ မေမေ့နှုတ်ခမ်းလေးကို လှမ်းနမ်းလိုက်တယ် .. ။
အမေကလဲ မျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီး ပြန်နမ်းတယ် .. ။ နမ်းရင်းနဲ့ အမေ့ကို ကုတင်ပေါ် လှဲချလိုက်တော့တယ် .. ။ သားအမိနှစ်ယောက် အနမ်းတွေက အရမ်းကို ကြမ်းလာတယ် .. ။ ဟိုဘက်ခန်းက မေသန္တာရဲ့ အော်သံတွေကလဲ စိတ်ကို ပိုကြွလာစေတယ်လေ .. ။
အမေ့ကို နမ်းနေရင်းနဲ့ ထမိန်ပေါ်ကနေ အမေ့အဖုတ်လေးကို လှမ်းကိုင်လိုက်တော့ အမေက နမ်းနေတာကို ရပ်ပြီး ကျနော့်လက်ကို သူ့လက်နဲ့ လှမ်းတားတယ် .. ။ ကျနော် နားမလည်စွာ အမေ့ကို ကြည့်နေမိတယ် .. ဘာလို့တားရတာလဲဟင် အမေမကြိုက်လို့များလား .. ။ အမေကလဲ ရီဝေဝေနဲ့ ကျနော်နဲ့ မျက်လုံးချင်းဆုံအောင် အကြာကြီး ကြည့်ပြီးနောက် ကျနော့်လက်ကို သူ့လက်လေးနဲ့ ပြန်ကိုင်တယ် .. ။ ကိုင်ပီးတော့ ထမိန်ကြားကနေ အတွင်းခံဘောင်းဘီအောက်အထိ သူ့အဖုတ်လေးကို ကျနော့်လက်နဲ့ထိတဲ့အထိ ပို့ပေးလိုက်တယ် .. ။
ကျနော် ကျေနပ်အောင် မေမေက ခွင့်ပြုတာနေမှာ .. ။ ကျနော် အမေ့ကို အရမ်းကို ချစ်သွားပြီး အမေ့နှုတ်ခမ်းလေးတွေကို အားရပါးရကို ဖိနမ်းပစ်လိုက်တယ် .. ။ အမေ့အဖုတ်လေးကလဲ အရည်တွေကို ရွှဲလို့ .. ။ အမေ့ထမိန်ကိုချွတ် အတွင်းခံလေးကိုပါချွတ်ပီး အမေ့ရဲ့အရည်တွေ ရွှဲနေတဲ့ အဖုတ်လေးကို လျှာနဲ့ယက်ဖို့ပြင်တယ် .. ။
” အ .. သားး သား မ မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် .. အမေ့အင်္ဂါက ညစ်ပတ်နေတယ်လေ ”
ဆိုပြီး ကျနော့်ဆံပင်ကိုဆွဲပီး မရမကကိုတားနေတော့ ကျနော်လဲ ပြုံးပြီး လက်လျှော့လိုက်တယ် .. ။ အမေ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာ အသာအယာ ပက်လက်လှန်ခိုင်းတယ် .. ။ ပီးတော့ အမေ့အပေါ်ကနေ ကျနော်ကဘေးတစောင်း အုပ်မိုးပြီး လက်တဖက်က အမေ့အဖုတ်လေးကို ကလိပေးနေလိုက်တယ် .. ။ မျက်လုံးချင်းဆံအောင်ကြည့်ပြီး ကလိပေးနေတော့ အမေ့ခမျာ ရှက်လဲရှက် နေလို့လဲ အရမ်းကောင်းနေပုံပဲ .. ။ ကျနော်လဲ အမေ့အဖုတ်ကို လက်နဲ့လိုးပေးနေရင်း ..
” အမေ အခု သားကိုင်ထားတာ ဘာလဲဟင် ”
” ဟင် အဲ အဲဒါ .. အမေ့ရဲ့ အင် အင်္ဂါပါ သား ”
” ဘာအင်္ဂါလဲ အမေရဲ့ .. မရဘူး တခြားဟာဖြေ ”
” စပ်.. စပ်ပတ်ပါ .. အားး သားး ဖြေးဖြေး ဖြေးဖြေး”
အမေက မေးခွန်းတွေဖြေရင်း ပိုပြီးဖီးလ်တွေလာနေတယ် .. ။
” မရသေးဘူးကွာ အမေ .. နောက်တမျိုး ”
” အ အမေ့ရဲ့ အဖုတ်ပါ .. ကျေနပ်ပါတော့နော် သားလေး ”
” ဟားး .. အမေက ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ .. သား မကျေနပ်သေးဘူး .. နောက်တမျိုးပြော ”
” အ အမေ့ရဲ့ စောက် .. စောက်ဖုတ်ကွာ … အားးး ကောင်းလိုက်တာ မေမေကောင်းလိုက်တာ .. သားရယ် ”
အမေ့အသံက နည်းနည်းကျယ်လာတယ် .. ။ ဟိုဘက်ကလဲ သူ့အသံနဲ့သူဆိုတော့ ကြားကြမှာမဟုတ် .. ။
” အမေ အခု ဘာလုပ်မလို့လဲဟင် .. ပြောစမ်း ”
” လိုးတာခံမလို့ အားး .. သ သားလိုးတာ ခံမလို့ အီးးး အခုက သားလက်နဲ့ လိုးတာ ခံနေတာ ”
” အခု သားလက်နဲ့ဆိုတော့ ခနနေ ဘာနဲ့ခံမှာလဲ ”
အမေက မျက်စောင်းထိုးတယ် .. ။ ပီးတော့ … တိုးတိုးလေး ပြောတယ်။
” သားလီးနဲ့ပေါ့ကွယ် .. အမေ့သားလီးနဲ့လိုးတာ ခံမှာပေါ့ သားရယ် ” တဲ့ .. ။
ပြောပြီး ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းတိုးဝင်လာတယ် .. ။
” ဟိုဘက်မှာ လိုးနေတာ ဘယ်သူတွေလဲ အမေ ”
” မေမေ့ယောက်ျားနဲ့ မေမေ့ချွေးမ လိုးနေကြတာ .. အားး မြန်မြန်လေး ကလိပေး သားး မြန်မြန်လေး ”
” အမေ့ ယောက်ျားလီးကြီးကို မလွမ်းဘူးလား ”
” လွမ်းတယ် ”
” အခု အဖေလာလိုးရင် ခံမှာလား .. ”
” ခံမှာ .. ”
” အဖေ့ကို မုန်းတယ်ဆို ”
” မုန်းတယ် .. အားး ကောင်းတယ် မြန်မြန်လေး သား .. မုန်းပေမယ့် ခံမှာ နောက်ဆုံးတခါအနေနဲ့ ခံမှာ .. ပီးရင် လမ်းခွဲမှာ ”
” ဒါဆို သားကကျတော့ မေမေ့ကို မလိုးရတော့ဘူးလား ”
” ဟင့်အင်း .. ဟင့်အင်း လိုးပေး လိုးပေး မေမေ့ကို နှစ်ယောက်လုံး လိုးပေးး .. တပြိုင်ထဲ လိုးပေးး .. အားး ဖီးလ်ရှိလိုက်တာ .. သားကလိတာအရမ်းကောင်းတာပဲ သားရယ် အားးရှီးး ”
အမေနှုတ်ခမ်းကို ကိုက်ပြီး ညီးတွားတယ် .. တအားကို ဖီးလ်တက်နေတဲ့ မေမေ့ပုံဟာ လီးဆာနေတဲ့ ဖာသည်မလေး တစ်ယောက်လို အရမ်းကို လိုးချင်စရာ ကောင်းလွန်းနေတယ် .. ။
” အားး သားး မေမေပြီးပြီ မေမေပြီးပြီ အားးးးး … ”
မေမေ့ကော့ပျံပြီး ကျနော့်လက်ထဲမှာတင် တချီပီးသွားတယ် .. ။ ပီးတော့ မောပန်းပြီး မေမေ ငြိမ်နေတော့တယ် .. ။ ကျနော့်မိန်းမနဲ့ အဖေနဲ့ လိုးနေတဲ့အခန်းကတော့ နောက်တချီတောင် ဆွဲနေကြပြီ .. ။ အသားညိုညို အရိုးအဆစ်ကြီးကြီး ကျနော့်မိန်းမမေသန္တာကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပီး အနောက်ကနေ အားရပါးရဆောင့်လိုးနေတာ အရမ်းကို ဖီးလ်တက်ချင်စရာကြီးဗျာ .. ။
ကျနော်လဲ အားကျမခံ ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပြီး အမေ့အဖုတ်ကို လျှာနဲ့ယက်ပစ်လိုက်တယ် .. ။ ဒီတခါ မေမေက မတားတော့ဘူး .. ကျနော့်ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး သူ့အဖုတ်နဲ့ ဆွဲဆွဲပွတ်နေတယ် .. ။ အမေ့အဖုတ်မှာ ရွှဲနေတဲ့အရည်တွေ အကုန်လုံး ကျနော် ယက်ပစ်လိုက်တယ် .. ။ ချစ်လိုက်တာ အမေရယ် .. သားအမိချင်းကြားမှာ ရှက်စရာ ရွံစရာမရှိ .. ။ အမေ့ကို ထိုင်ခိုင်းပီး အမေ့ပါးစပ်ထဲကို ကျနော့်လီးနဲ့ လိုးလိုက်တယ် .. ။
အမေဗျာ လီးစုပ်တာ အရမ်းကျွမ်းကျင်တာပဲ .. ကျနော် အမေ့ ပါးစပ်ကို လိုးတာ အချက်သုံးဆယ်ကျော်လောက်မှာတင် လရည်တွေ အမေ့ပါးစပ်ထဲ ပန်းထွက်ကုန်တယ် .. ။ ကျနော့် လရည်တွေကို အမေက အငမ်းမရ မြိုချလိုက်တယ် .. ။ ကျနော်လဲ မနေနိုင်တော့ပဲ မေသန္တာကို သူ့ယောက္ခထီး လိုးနေသလို အမေ့ကို ကျနော် ဖင်ကုန်းခိုင်းပီး လိုးပစ်လိုက်တယ် .. ။
” အ .. အ သ သားးလီးက အရှည်ကြီးပဲ သားလေးရယ် .. ကောင်းလိုက်တာကွာ .. သားမိန်းမကို သားအဖေက လိုးနေတဲ့အတွက် သားက ကလဲ့စားချေတဲ့အနေနဲ့ မေမေ့ကို အားရအောင်လိုးစမ်း သားရယ် .. မေမေ့ အဖုတ်ကြီးကို ကွဲသွားအောင် လိုးပစ်လိုက်စမ်းပါ သားရယ် … အားး ရှီးး ကောင်းလိုက်တာကွာ”
ကျနော်လဲ အမေ့ဖင်ကြီးကို သုံးလေးချက် ပစ်ရိုက်လိုက်ပြီး ….
” မေမေက ဖာသည်မလားး အားး .. သားလိုးနေတာ ဖာသည်မလား ဖြေစမ်းကွာ အားး ”
” ဟုတ်တယ် .. ဖာသည်မ .. မေမေက ဖာသည်မ .. ကိုယ့်သားကိုတောင် မရှောင်ပဲ အလိုးခံနေတဲ့ဖာသည်မ အားးး ”
” မေမေ သားကို ဆဲစမ်းကွာ .. နာအောင် ဆဲပေးစမ်းပါ ”
” ဘယ်လို ဆဲရမှာလဲဟင် .. မေမေ မဆဲဖူးဘူး သားရဲ့ ..”
“မသိဘူးကွာ ဆဲဆိုဆဲစမ်း အခုဆဲစမ်း .. ”
” ကောင်းလိုက်တာ မအေလိုးသားလေး ကောင်းလိုက်တာ သားရယ် … မေမေ့ကို နာနာလေး လိုးစမ်းကွာ ကိုယ်မေကိုယ်လိုး သားလေး အားး ရ ရပြီလားးဟင် ”
” ရပြီ အမေ ရပြီ အားး .. လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ အမေရယ် ”
” ဘွတ် … ဖတ် ဖတ် …ဗြွတ် ဗြွတ် ”
” အင့် .. အ အ သား ဖြေးဖြေးလုပ်ပါကွယ် .. အားး ရှီးး .. အား အားး ဟင့် ကောင်းလိုက်တာ မေမေ့သားရယ် ”
” ဖတ် ဖတ် ဖတ် … ဟင့် အို … ဖတ် ဖတ် .. အို သားး ဖြေးဖြေး အမေ မခံနိုင်တော့ဘူး ”
” သား ပီးတော့မယ် အမေ … အားး မြန်မြန်လိုးလိုက်တော့မယ် အမေရေ ”
ကျနော်လဲ ပြောပြောဆိုဆို အမေ့အဖုတ်ထဲက လီးကို ထုတ်ပြီး အမေ့ဖင့်ထဲဆောင့်လိုးထည့်လိုက်သည် .. ။
” အ .. အ မ မလုပ်ပါနဲ့ .. အမေ အမေသေပြီ အမလေးး .. တောင်း တောင်းပန်ပါတယ် အမလေးး အီးးး အမေ့ကို သတ်မလို့လား .. ရပ် ရပ်ပါတော့နော် .. အီးးး ဟင့် ဟင့် မ မလုပ်ပါနဲ့တော့ရှင် အီးး”
အမေ ငိုပါလေတော့တယ် .. ။ ကျနော်လဲ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ .. ဒီအရွယ်ထိရောက်မှတော့ အမေ့ကို အဖေ ဖင်လိုးဖူးလိမ့်မယ်လို့ပဲ ကျနော်ထင်ခဲ့မိတယ် .. ။ ခုမှသိလိုက်ရတာ အမေ့စအိုဟာ ပါကင်သာဖြစ်နေသေးသည် .. ။ ဟိုဘက်ခန်းက သီချင်းသံရော သူတို့ညီးသံတွေပါ ဆူညံနေလို့တော်တော့တယ် .. မဟုတ်ရင် အမေ့ငိုသံကြားသွားတော့မယ် .. ။ ကျနော်လဲ မထူးတော့ဘူး .. မြန်မြန်ကိစ္စဖြတ်မှလို့တွေးရင်း အမေ့ပါးစပ်ကို လက်နဲ့ပိတ်ပြီး ဆက်တိုက်ဆောင့်လိုးပစ်လိုက်တော့တယ် .. ။
” အူးး အူးး ဖလူးး အူးး အု အု ”
လက်နဲ့ အုပ်ထားပေမယ့် အမေ့အော်သံက ထွက်နေတုန်းပဲ .. ။ အမေ မျက်ရည်တွေပါ ကျလာသည် .. ။ ကျနော်လဲ ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်ထည့်လိုက်ရာ ဆယ့်ငါးချက်လောက်မှ ပီးသွားတော့တယ် .. ။
” အမေ အရမ်းနာနေလား ဟင် ”
ကျနော် အမေ့ဖင်ထဲကလီးကို ထုတ်လိုက်တော့ သွေးစနည်းနည်းပင် ကပ်ပါလာသည် .. ။ အမေ့ခမျာ ကုတင်ပေါ်မှာ ခွေခွေလေး ဆက်ငိုနေရှာတုန်းပင် .. ။ ကျနော်လဲ ဟိုဘက်ခန်းက အဖေတို့ မပီးခင် အမေ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပွေ့ချီပြီး အိမ်အောက်ကို ဆင်းလာလိုက်တော့တယ် … ။ ပီးတော့ အဝတ်အစားတွေဝတ်ပြီး အပြင်ကို ပြန်ထွက်ရတယ် .. ။ အမေ့ခမျာ တနေ့လည်ခင်းလုံး လမ်းပင်မလျှောက်နိုင်ရှာတော့ …… ။
ညနေ ….. ။ အလုပ်က ပြန်လာသလိုနဲ့ အမေနဲ့ကျနော် အိမ်ကိုဝင်လာတဲ့အခါ ဧည့်ခန်းမှာ ထိုင်နေတဲ့အဖေကို တွေ့ရတယ် .. ။ အဖေက လှမ်းနှုတ်ဆက်တာ မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး အမေအခန်းထဲဝင်သွားတော့ အဖေကနောက်က လိုက်ဝင်သွားတယ် .. ။ ခနနေတော့ အမေတို့ အခန်းထဲမှာ ဝုန်းဒိုင်းနဲ့ စကားများသံ ပေါက်ကွဲသံတွေ ကြားလိုက်ရတယ် .. ။ အဖေ အပြင်ပြန်ထွက်လာတော့ ကျနော့်ကို မျက်နှာငယ်နဲ့ ကြည့်နေရှာတယ် .. ။ သနားပေမယ့် ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ကိစ္စမို့ ကျနော် ခပ်တင်းတင်းပဲ နေနေလိုက်တယ် .. ။
အဖေလဲ အကုန်နားလည်သွားပြီး သူ့အဝတ်အစားတွေသိမ်းပြီး ထွက်လာတော့တယ် .. ။ အဖေထွက်လာတာမြင်တော့ ဘယ်ချိန်ထဲက သိမ်းထားမှန်းမသိတဲ့ အဝတ်ထုတ်နဲ့အတူ ကျနော့်မိန်းမမေသန္တာ အခန်းထဲက ထွက်လာတယ် .. ။
” အဖေ .. ကျ ကျမကိုပါ ခေါ်သွားပါနော် ”
အဖေ့ကို တုန်တုန်ရီရီနဲ့ လှမ်းပြောပြီး ကျနော့်ကို အသနားခံသလို ကြည့်နေတယ် .. ။ ကျနော်လဲ မျက်နှာကို လွှဲပစ်လိုက်တော့ အဖေနဲ့ မေသန္တာ နှစ်ယောက်အတူ တိတ်တိတ်လေး အပြင်ထွက်သွားကြတယ် .. ။ ခနနေတော့ ကားသံကြားလိုက်ရပြီး ကျနော့်ဘဝထဲကနေ ကျနော့်မိန်းမနဲ့အတူ အဖေ ထွက်သွားတော့တယ်လေ .. ။ ဝမ်းနည်းသလိုလို လွမ်းသလိုလိုနဲ့ အမေနဲ့ ကျနော် နောက်နေ့တွေအထိ စကားမပြောဖြစ်ကြတော့ဘူး .. ။
နောက်တစ်ပတ်လောက် အကြာမှာ အဖေ့ဆီက စာအိတ်တလုံး အိမ်ကို ရောက်လာတယ် .. ။ အဖေရော မေသန္တာရော သူတို့ကို ခွင့်လွှတ်ဖို့ တောင်းပန်ထားတဲ့စာရယ် အမေနဲ့ ကွာရှင်းစာချုပ်ရယ် တွေ့လိုက်ရတယ် .. ။ တပတ်လုံး စကားမပြောတဲ့ အမေ့ဆီက စကားသံတစ်ခုထွက်လာတယ် .. ။
” သား အမေ ဒီည နည်းနည်းသောက်ချင်တယ် ”
တဲ့ ကျနော်လဲ မေမြို့ဝိုင်နှစ်လုံး ဝယ်လာပြီး သားအမိနှစ်ယောက် စကားမပြောပဲ ထိုင်သောက်နေလိုက်တယ် .. ။ နှစ်လုံးလုံးကုန်တော့ အမေက တော်တော်လေးကို မူးနေလေပြီ .. ။ အန်ချင်တယ် ပြောလို့ ရေချိုးခန်းထဲ တွဲပို့ပေးလိုက်တယ် .. ရေချိုးခန်းထဲရောက်တာနဲ့ အမေ ဘာမပြောညာမပြော သူ့အဝတ်အစားတွေအကုန်ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် .. ။
” သား မေမေ့ကို ကြည့်စမ်း .. မေမေ ဆွဲဆောင်မှုရှိသေးရဲ့လား ”
” ရှိတာပေါ့ အမေရယ် .. ဒီလောကမှာ အမေသာ အလှဆုံးပါ ”
” ဒါဆို ဒီကြားထဲ အမေ့ကို သားဘာလို့ ရှောင်နေတာလဲ ”
” အမေက သားကို စိတ်ဆိုးနေတယ် ထင်လို့ပါ အမေ ”
” ဒါဆို အခုအမေက လွတ်လပ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်သွားပြီ .. ပိုင်ရှင် မရှိတော့ဘူး .. အဲတော့ သားအမေ့ကို ရှောင်နေဦးမှာလား ”
အဲလိုပြောတော့ ကျနော်လဲ ဘာမှပြောမနေတော့ဘဲ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး အမေ့အဖုတ်ကို လီးနဲ့တန်းထိုးပစ်လိုက်တော့တယ် .. ။
” အို .. ”
” ဟင့် … သားရယ် ဖြေးဖြေးလုပ်ပါကွာ .. မေမေက ထွက်မပြေးပါဘူး ”
” မေမေက ထွက်မပြေးပေမယ့် သားညီလေး( လီး ) က မေမေ့ညီမလေး( အဖုတ် ) ကိုမြင်တော့ အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ချက်ချင်း ပြေးဝင်သွားတာ မေမေရေ … ”
” ဟွန်းး စကားတတ်တိုင်း .. ကိုယ့်အမေကိုယ် စကားလှလှတွေပြောပြီး အနိုင်ကျင့်နေတယ် ”
ပြောပြီးတော့ အမေက မျက်စောင်းလှလှလေး လှမ်းထိုးတယ်ဗျာ .. ။
” အ .. အမလေးး ဖြေးဖြေး လုပ်ပါသားရဲ့ .. အားးးး သေပါပြီ .. သားကွာ မင်းမိန်းမကို လိုးနေတယ်များမှတ်နေလား .. ကိုယ့်အမေကိုယ်လိုးတာ ဖြေးဖြေးလိုးပါလားဟဲ့ အားးး သေပါပြီ .. ငါပြောနေတာလဲ ဂရုမစိုက်ဘူး ”
” ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး အမေရေ .. သားလီးက အမေ ဆာနေမှန်းသိလို့ ခပ်မြန်မြန်ပဲ အမေ့ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနေတာ သိရဲ့လား .. ”
” အားးရှီးး အမေ့ အဖုတ်တော့ ကွဲပါပြီ ”
” ဟားး လိုးလို့ ကောင်းလိုက်တာ အမေရယ် ”
” အ .. အမလေး သေပါပြီတော် ”
” အားး ”
နှစ်ယောက်ထဲရှိတဲ့ အိမ်ကြီးထဲမှာ အမေ့အော်သံတွေနဲ့ပဲ ဖုံးလွှမ်းနေတော့တယ် .. ။ အော် အဖေလဲ ခုချိန်ဆို ကျနော့်မိန်းမ မေသန္တာကို အားရပါးရလိုးနေတော့မှာ ကျိန်းသေသည် .. ။ အဖေ မသိလိုက်တာကတော့ အယူရှိရင် အပေးရှိရတယ်ဆိုတဲ့ လောကနိယာမ တစ်ခုကိုပဲ .. ။
အဖေ ကျနော့်မိန်းမကို လိုးနေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်ကလဲ အဖေ့မိန်းမ ကျနော့်အမေကို အားရပါးရ လိုးနေရတယ်လေ .. ။ ဒီအကြောင်းကို အဖေ ဘယ်တော့မှ သိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး .. အဖေမှမဟုတ်ဘူး တလောကလုံး ဘယ်သူမှလဲ သိမှာမဟုတ်တော့ဘူး .. ။
ကျနော့်ကို သားလိုရော လင်ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပါ ချစ်ပြီး အရာရာနားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို အစားပြန်ပေးခဲ့တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ အဖေ .. ။ အတွေးတွေနဲ့ ကျနော် ခပ်ယဲ့ယဲ့ ပြုံးလိုက်မိသည် .. ။ အမေကတော့ ဘာမှတွေးဟန်မတူပဲ ကျနော့်လီးကိုသာ မက်မက်မောမော စုပ်ပေးနေလေတယ်.. ။
” မေမေ သားလီးကို အရမ်းစွဲလန်းနေပြီ သားရယ် .. မေမေ ဒီလိုမျိုး နေ့တိုင်း သားလေးရဲ့ လီးကို စုပ်ပေးပါရစေနော် ”
ကျနော် အမေ့မျက်နှာလေးကို မော့ပြီး ကြင်ကြင်နာနာနဲ့ အမေနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းပေးလိုက်မိတော့တယ်ဗျာ … ။ အမေနဲ့ကျနော် နေ့တိုင်းနီးပါး လင်မယားလို နေလာကြတာ နှစ်လနီးပါးပင် ကြာခဲ့လေပြီ .. ။ တအိမ်လုံး တခြံလုံး အမေနဲ့ကျနော် မလိုးဖူးတဲ့နေရာ မရှိသလောက်ပင် .. ။ ည ၁၁ ၁၂ ဆိုရင် တခါတလေ ဝရံတာအထိ ထွက်ပီးလိုးဖြစ်ကြသည် .. ။ အမေလဲ incest ကို ဝင်စိတ်စားမှန်း ကြာလေ သိလာသည် .. ။
ကျနော် အမေ့ကို လိုးနေချိန်ဆို တခါတလေ အမေက ” အဖေ .. အဖေ သမီးကို လိုးပါ နာနာလေးလိုးပါ ” လို့ ကျနော့်အဖိုး သူ့အဖေကို အော်ပြီး ခံတတ်တယ် .. ။ တခါတလေကျတော့လဲ ” ကိုကြီး .. ကောင်းလိုက်တာ ကိုကြီးရယ် ” ဆိုပီး ကျနော့်ဦးလေး အမေ့အကိုကို တမ်းတပြီး ခံတယ် .. ။ နောက်ဆုံး ဦးလေးရဲ့သား ကျနော့်ညီဝမ်းကွဲ အထိ တမ်းတပြီး ခံတတ်သည် .. ။
နောက်ပြီးတော့ အမေက ဒီလပိုင်းအတွင်း အရင်ကနှင့်မတူတော့ .. ။ အရင်က အိန္ဒြေရရနဲ့ အဖေ့အပေါ်သစ္စာရှိရှိ နေတတ်တဲ့ အမေက အခုဆို အဝတ်အစားဝတ်တာ ဟိုပေါ်ဒီပေါ်တွေ များလာတယ် .. ။ အိမ်ရှေ့က အင်္ကျီဆိုင်မှာ အမေတယောက်ထဲ ရောင်းနေရတော့ အဝတ်အစားစိတ်ကြိုက်ဝတ်လို့ ရလာတာလဲ ပါလိမ့်မည် .. ။ လည်အရမ်းဟိုက်လွန်းတဲ့ အင်္ကျီတွေ .. အပေါ်က ပိုက်ပုံစံမျိုး အောက်က ဘော်လီအထိ အရှင်းမြင်ရတဲ့ အင်္ကျီမျိုးတွေ .. တခါတရံဆို T shirt အပွဝတ်ထားပြီး အောက်က ဘော်လီပင် ခံမဝတ်တာမျိုးတွေ ဝတ်လာတယ် .. ။
လည်ဟိုက်တဲ့အင်္ကျီဆိုရင် အမေဈေးရောင်းရင်း ခါးနည်းနည်းကိုင်းလိုက်ချိန်ဆိုရင် အမေ့နို့တွေဟာ အတိုင်းသားမြင်နေရပြီလေ .. ။ အဲဒီလိုအချိန်ဆို အထည်လာဝယ်တဲ့ သကောင့်သားတွေ မျက်လုံးက အမေ့နို့တွေကိုပဲ တန်းတန်းမတ်မတ် စိုက်ကြည့်နေကြတော့တယ် .. ။ ထူးဆန်းစွာပင် ကျနော် အဲလိုမြင်ကွင်းမျိုးမြင်ရရင် သဝန်လုံးဝမတိုမိ .. ။ အမေ့နို့တွေကို တယောက်ယောက်က သေချာစိုက်ကြည့်ပြီး ငမ်းသွားပြီဆိုရင် အဲဒီကောင်ပြန်သွားတာနဲ့ ကျနော့်စိတ်တွေ ထန်လာတယ် .. ။ အဲဒီချိန်ဆို အမေ့ကို အနောက်က အထည်ထုတ်တွေထားတဲ့ ဘီရိုကြားထဲ ဆွဲခေါ်တယ် ပီးတော့ ထမိန်ဆွဲလှန်ပီး တချီ လိုးပစ်လိုက်တော့တာပဲ .. ။
ဒါပေမယ့် အမေက ပြတော့ပြတယ် .. ရိသဲ့သဲ့တော့ အလုပ်မခံ .. ။ ရိသဲ့သဲ့လုပ်ရင် ဆက်မရောင်းပဲ နှင်ထုတ်ပစ်သည် .. ။ မေမြို့အတက်လမ်းဆိုတော့ သူစိမ်းဧည့်သည်တွေသာ အဝယ်များလို့တော်ပါသေးသည် .. ။ မဟုတ်ရင် ဝယ်မယ့်သူတောင် ရှိမှာမဟုတ် .. ။
ဒီလိုနဲ့ ညတညကို ရောက်လာတော့တယ် .. ။ အမေက မပြောမဆို ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲတိုးဝင်ပြီး စကားတခွန်းပြောလိုက်တယ် .. ။
” သား .. မေမေ့ကို online ပေါ်မှာ sex chat နေတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက် ရှိနေတယ်ဆိုရင် မေမေ့ကို သား စိတ်ဆိုးမှာလား ”
တဲ့ နည်းနည်းတော့ အံသြသွားရတယ် .. ။ ဒါနဲ့
” ဘယ်သူလဲ အမေ .. ဘယ်ကလဲ ဘယ်အရွယ်လဲ မဟုတ်တရုတ်ဆိုရင်တော့ သား မကြိုက်ဘူးနော် ”
” သူက မန်းလေးက .. အမေနဲ့ စတွေ့တာ ရက်နှစ်ဆယ်လောက်ရှိပြီ .. ဘယ်အရွယ်လဲဆိုတော့ သားထက်အများကြီး ငယ်တယ် .. တက္ကသိုလ် ပထမနှစ်ပဲရှိသေးတယ် .. အသက်က ၁၇ တဲ့ ”
ပိုပြီး အံသြသွားရတယ် .. ၁၇ နှစ် အရွယ်က ဒီလို ၄၀ ကျော် အန်တီကြီးကို ဘယ်လိုများ ကြိုက်ရတာလဲ .. ။
” ဟုတ်ပါ့မလား အမေရယ် ”
” ဟုတ်တယ် သား .. သားယုံမှာ မဟုတ်ပေမယ့် အမှန်ပဲ သား ”
” ဟင် … ဒါဆို အမေတို့ ဘယ်လိုတွေ့လဲ ပြောပြပါလား ”
” ဒီလို .. သားရေ ………
အဲဒီနေ့က မိုးတွေရွာနေတယ် .. အဲဒီအချိန်မေမြို့က ဆင်းလာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်က ဆိုင်ကယ်ရပ်ပြီး မိုးခနလာခိုတယ် သား .. ။ အမေလဲ မရိုင်းဘူးလေ ခွင့်ပြုလိုက်တာပေါ့ .. ကောင်လေးက ထပ်ပြီး အကူအညီတခုထပ်တောင်းတယ် .. သူ အရင်ညက မေမြို့မှာလည်ရင်း ပိုက်ဆံအိပ်ရော ဖုန်းရော ပျောက်သွားလို့တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လူစုကွဲပြီး ညထဲက ဘုရားမှာ သွားအိပ်နေလိုက်ရတယ်တဲ့ .. ခုထိဘာမှလဲ မစားရသေးလို့ ထမင်းကျွေးပါလား တဲ့ .. သူမိကောင်းဖခင်သားသမီးပါ ပေါ့ .. သူ့အဖေက ပွဲရုံပိုင်ရှင်လို့လဲပြောတယ် ..
ကောင်လေးက ငယ်ငယ်လေး ကလေးသာသာဆိုတော့ သားရယ် အမေလဲ ထမင်းခူးကျွေးလိုက်တာပေါ့ … ။ သူ့အဝတ်အစားတွေကလဲ မိုးတွေစိုနေတော့ အင်္ကျီတထည်ပါ လဲပေးခိုင်းလိုက်တယ် .. သူက ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးတဲ့ သနားစရာလေး မိုးစဲတော့မှ ပြန်သွားတော့တယ် .. အမေ့ဖုန်းနံပါတ်လဲတောင်းသွားတယ် .. နောက်တခါလာရင် နေရာမမှတ်မိရင် ခေါ်လို့ရအောင်တဲ့ အဲဒီနေ့က သားက ညနေမှ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်လေ .. ။
ဒီလိုနဲ့ နောက်နေ့ကျ ဖုန်းလာတယ် .. သူ့အမေဆက်တာ .. သူ့အမေက ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်ပေါ့ နောက်ကြုံရင် အပြင်မှာ ဆုံပြီး ကျေးဇူးဆပ်မယ်ပေါ့ .. ဖုန်းဆက်ပြီးပြောတာ .. ဒီလိုနဲ့ နောက်နှစ်ရက်လောက်ထိ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ပဲ .. နောက်နှစ်ရက်ကျ viber ကနေ လာ hi တယ် .. အဲဒီကောင်လေးပေါ့ .. ။ အစထဲက ခေါ်တာ မမတဲ့ အမေ့ကို … အမေလဲ အခြေအနေ သိပ်မဟန်ဘူးဆိုပြီး စကားသိပ်မပြောဘူး .. ဒါပေမယ့် သူက နေ့တိုင်း စကားတွေ လာပြောတယ် .. အူကြောင်ကြောင်ကလေးလေး သာသာရယ် .. အမေလဲ တခါတလေတော့ စာပြန်မိတာပေါ့ သားရယ် .. ။
နောက်ငါးရက်လောက်နေတော့ သူ့ရင်ထဲက စကားတွေပါပြောလာတယ် ..။ မေမေလဲ ဒီအရွယ် စိတ်ကစားတာပဲဆိုပီး ” မမက ယောက်ျားမရှိပေမယ့် သားတယောက်ရှိတယ် မင်းထက်တောင် အများကြီး ကြီးတယ် ” ဆိုတော့ ” တောင်းပန်ပါတယ် မမရယ် .. ကျနော် အပြင်တွေဘာတွေထိ လာမတွေ့ပါဘူးနော် .. အဲဒီအကိုကြီးကိုတော့ မတိုင်ပါနဲ့ဗျာ ” တဲ့ မေမေလဲ ဝန်ခံရရင်သနားသွားတယ်
သား .. မေမေ့အမှားပါ ပီးပီးရောဖြစ်မယ်ထင်လို့ သူ ဒီအိမ်မှာ ထမင်းစားနေတုန်းက မေမေ မသိမသာ မေမေ့ရင်သားတွေကို မြင်သာအောင် ပြလိုက်မိတယ် သား .. ။ အဲဒီကနေ သူ စွဲလန်းသွားတာပဲ .. ။ အပြင်ထိမတွေ့ပါဘူး ဘာညာ ကတိတွေပေးတော့ မေမေလဲ သူ့အလိုလိုက်လိုက်မိတယ် .. ။ ပုံတွေဘာတွေ ရိုက်ပို့လိုက်မိတယ် .. အစကတော့ အဝတ်အစားနဲ့ ခပ်ဟော့ဟော့ပုံတွေပဲ ပို့တာပါ သားရယ် … ။”
” ဟင် ဒါဆို အစကဆိုတော့ အခုကျ အမေ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံတွေပါ ပို့လိုက်ပြီပေါ့ ”
အမေ ရှက်ပြုံးလေး ပြုံးတယ် .. ။ ပြီးတော့
” အမေ ဝန်ခံပါတယ် .. တစ်ပုံ နှစ်ပုံတော့ ပို့ပေးမိတယ် သား … Sex chat မိတာ တပတ်လောက်ပဲရှိပါသေးတယ် .. ။ ကောင်လေးက ကလေးဆိုတော့ မေမေက စကားအကြမ်းလေးတွေ ပြောပေးရုံနဲ့ သူ့ခမျာ အာသာဖြေပြီးသွားပြီ သား.. သူ့လီးလေးက သေးသေးလေးရယ် .. ”
ပြောပြီး အမေက ရယ်ပါတော့တယ် ..။ ကျနော်လဲ ..
” အမေဗျာ .. မကောင်းဘူး သားတစ်ယောက်လုံး ရှိနေတာ မကျေနပ်ဘူးလား ”
” အဲလို မဟုတ်ပါဘူး သားရယ် .. သားခွင့်မပြုမချင်း အမေတို့ အပြင်မှာ မတွေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ပီးသား ”
” အော် ဒါဆို ခွင့်ပြုရင်တော့ တွေ့ကြမယ်ပေါ့လေ ”
” သားရယ် .. သားအတွက်လဲ ကောင်းတာရှိလို့ အမေက ပြောနေရတာပေါ့ ”
” အင်း .. ပြောပြပါဦး .. သားနဲ့ ဘယ်လို ဆိုင်သွားတာလဲ ”
ဆိုတော့ အမေက ပုံတွေထုတ်ပြတယ် .. ကောင်လေးနဲ့ သူ့အမေနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေ .. ။ ကောင်လေး အမေပုံစံကတော့ ခပ်ရိုးရိုးပုံမျိုးပင် .. ကျနော့်အမေနဲ့စာရင် နည်းနည်းပိုပြည့်တယ် ခန္ဓာကိုယ်က .. ခပ်ဝဝ အကိတ်ပုံစံမျိုး .. ။ ခုထိနားမလည်သေးဘူး .. ကျနော်နဲ့ ဘာများဆိုင်လို့လဲပေါ့ .. ။ အမေက
” သား ကြည့်ကြည့်စမ်း .. သူ့အမေ ဘယ်လိုနေလဲ ”
” သာမန်ပါပဲ .. စိုးမြတ်သူဇာလို ပြည့်ပြည့်ဝဝကြီးပေါ့ ”
” ဒါဆို သား .. သားနဲ့အမေနဲ့လိုမျိုး သူတို့သားအမိကို ဆိုရင်ရော …. ”
” ဟာ အမေ .. အဲဒါ လက်မခံရင် ပြသနာ ကြီးလိမ့်မယ်နော် ”
” အမေ စမ်းကြည့်ပြီးပါပြီ သားရယ် .. တစ်ရက်က အမေ့ရဲ့ နို့ပုံကို အဲ့ကောင်လေးတောင်းတော့ အမေလဲရွဲ့ပီး မင်းအမေနို့ပုံ မမကို ပြရင် မမလဲ ပြန်ပြမယ်လို့ ပြောလိုက်တယ် .. ။ အမေလဲ မထင်ဘူး ကောင်လေးက တကယ်ရိုက်ပီး ပို့လိုက်တယ် .. သူ့အမေနေ့လည်ခင်း အိပ်နေတုန်း ဘော်လီပါချွတ်ပီး ရိုက်ထားတာ .. ။ အမေလဲ တွေးမိတာပေါ့ ဘော်လီပါချွတ်တာတောင် သူ့အမေက မနိုးဘူးလားပေါ့ .. သိရက်နဲ့ ငြိမ်ခံနေတာလား ဘာလား ပေါ့ .. ။
မိန်းမချင်းသိတယ် သား .. ဘော်လီက အဲလိုအိပ်ရက်နဲ့ လွယ်လွယ်ပြန်တပ်လို့မရဘူး .. နိုးရင် သိကို သိမှာပဲပေါ့ ..။ ဒါနဲ့သေချာအောင် နောက်နေ့ကျ ထပ်တောင်းလိုက်တယ် .. အဲဒီတော့ သူလဲ သွားရိုက်ပေးတာပေါ့ .. သူ ပြောပြတာ သူ့အမေက ဒီနေ့ဘော်လီမဝတ်ဘူးတဲ့ အမေလဲ အံသြသွားတယ် .. သူ့အမေက သိရက်နဲ့ ငြိမ်ခံနေတာများလား .. ပူလို့မဝတ်တဲ့နေ့နဲ့ တိုက်ဆိုင်တာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ် .. ။
ကောင်လေးကိုလဲ အမေစိတ်စမ်းကြည့်တယ် .. ။ သူ့အမေနို့ပုံကြည့်ပြီး ဂွင်းထုခိုင်းတယ် .. ဒါပေမယ့် သိပ်မရဘူး ပြောသလောက်ကြီး စိတ်မထဘူး .. ။ ဒါနဲ့ နောက်တနည်းပေါ့ .. သူ့အမေအတွင်းခံကို ယူခိုင်းပြီး မမနဲ့မင်းအမေက မိန်းမချင်းတူတူပဲ မမရဲ့ပေါင်ကြားကအနံ့လဲ အဲလိုမျိုးပဲ .. အဲဒီအတွင်းခံကို အနံ့ခံပြီး ထုကွာ ဆိုတော့ ထုတယ် .. ဒါတော့ တော်တော်လဲ သူ စိတ်ထတယ် .. ။ သားရော ဒါဆို ဘယ်လိုထင်လဲ .. ။”
” မပြောတတ်တော့ဘူး အမေရယ် .. အမေအကွက်ကျကျ တွေးပြီးပြီဆိုရင် လုပ်ချင်လုပ်ဗျာ ”
” မေမေ့သားကို အဲဒါချစ်တာ .. ဒါဆို စစီစဉ်ပြီနော် သား .. မေမေ တွေးထားတာက ဒီလို သား …. ”
ဆိုပီး သူ့အစီစဉ်ကို ပြောပြတယ် ……. ။ နောက်ဆယ်ရက်လောက်နေတော့ အဲဒီကောင်လေးတို့မိသားစု မေမြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ထွက်လာကြတယ် .. ။ အသွားမှာ ကျနော်တို့ အိမ်ကိုဝင်ပြီး လာမိတ်ဆက်ကြတယ် .. သူ့သားကို ကူညီခဲ့တဲ့အိမ်ပေါ့ .. ။ အမေက အဲ့နေကျတော့ လုံးဝ မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ထားတယ် .. ။ ထမင်းဖိတ်ကျွေးပီးတော့ သူ့အဖေက မေမြို့ကို အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားရမှာဖြစ်ကြောင်း ခရီးဆက်ဖို့ပြောတယ် .. အဲ့မှာ အဲဒီကောင်လေး ( နာမည်က သားငယ် ) သားငယ်က အိမ်မှာ အလည်နေခဲ့ချင်ကြောင်း သူ့အဖေကို ထပြောပါလေရော .. ။ သူ့အဖေလဲ မေမြို့ကိုလိုက်လာဖို့ဇွတ်ခေါ်တယ် .. မရတဲ့အဆုံး သူ့အမေကပါ သားငယ်နဲ့အဖော်လုပ်ပီး နေခဲ့ပေးမယ်ပေါ့ .. တညအိပ်ပဲနေပီး မနက်ဖန်မှ သူတို့သားအမိကို ဝင်ခေါ်လိုက်ဖို့ ပြောမှ သူ့အဖေလဲ မေမြို့ကို ခရီးဆက်သွားတော့တယ် .. ။
သားငယ်တို့ သားအမိကတော့ အိမ်မှာ အလည်ကျန်နေရစ်ခဲ့တာပေါ့ .. ။ ကျနော့်အမေ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ အမေက သူစီစဉ်သလိုပဲဆိုပီး မျက်စိမှိတ်ပြတယ် .. ။ သားငယ်အမေ အန်တီဥမ္မာနဲ့ ကျနော့်အမေနဲ့ ရယ်မောလို့ စကားတွေပြောရင်း နေ့လည်စာချက်စားကြတယ် .. ။ နေလည်စာ စားပြီးတော့ အမေက ..
” သားရေ မင်းအန်တီဥမ္မာနဲ့ မင်းညီကို ဘုရားလိုက်ပို့လိုက်ပါဦး .. မဥမ္မာရေ အဲဒီဘုရားက ဆုတောင်းပြည့်တယ် ရောက်တုန်း ကျမသား ကျော်ကျော် လိုက်ပို့လိမ့်မယ် .. ကျမကတော့ ဆိုင်စောင့်ရင်း နေနေခဲ့တော့မယ်ရှင် ”
” ဟုတ်လား .. ဒါဆိုအတော်ပဲ သား ကိုကျော်ရေ အန်တီတို့ကို လိုက်ပို့ပါဦး .. ရောက်တုန်း ဖူးရအောင်”
” ဟုတ် အန်တီ .. ဟုတ်ကဲ့ အခုသွားကြတာပေါ့ ”
” ဟာ မေမေကလဲ မနက်ကလဲ ကားစီးထားတာ ထပ်မစီးချင်တော့ပါဘူး .. အန်တီရွှေရည်နဲ့ပဲ နေခဲ့ပြီး ဆိုင်စောင့်နေလိုက်တော့မယ် ”
” အေး အေး .. ပီးရော မင်းအန်တီကို ဒုက္ခပေးမနေနဲ့ဦး ကြားလား ”
” ဟုတ် အမေ ”
လို့ပြောပြီး သားငယ် ပျော်သွားတယ် .. ။ မေမေကလဲ ..
” သား ကျော်ကျော် မင်းအန်တီဥမ္မာကို သေချာပတ်ပြခဲ့နော် ”
” စိတ်ချပါ အမေ ”
ပီးတော့ ကျနော်နဲ့ အန်တီဥမ္မာ ကားနဲ့ ထွက်လာတော့တယ် .. ။ ဘုရားရောက်တော့ အန်တီဥမ္မာ ဘုရားရှိခိုးတာစောင့်ပြီး အိမ်ပဲ တန်းပြန်ခဲ့လိုက်တယ် .. ။ အိမ်ရောက်တော့ အန်တီဥမ္မာက ..
” ဟင် ဆိုင်ကြီးလဲ ပိတ်ထားပါလား .. သား ကျော်ကျော်ရေ မင်းအမေတို့ တူဝရီး ဘယ်သွားကြပါလိမ့်”
ကျနော်လဲ အစီအစဉ်အတိုင်းပဲမို့ ပြုံးလိုက်မိတယ် .. ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ အိမ်ထဲဝင်လိုက်ကြတော့ ကျနော်တို့အခန်းထဲက အသံကြားလိုက်ရတယ် .. ။ ကျနော်လဲ တိုင်ပင်ထားသလို အမြန်သွားပီး တခါးဟထားတဲ့ကြားက ကြည့်တော့ သားငယ်က အမေ့လက်တွေကို ချုပ်ပီး အင်္ကျီကို အတင်းချွတ်နေတာ တွေ့လိုက်ရတယ် .. ။ ကျနော်လဲ ဖုန်းအမြန်ထုတ် ဓာတ်ပုံတွေ အမြန်ရိုက်ပြီး အန်တီဥမ္မာကို လက်လှမ်းပြလိုက်တယ် .. အန်တီဥမ္မာအခန်းရှေ့ရောက်လာတော့ အထဲက ဖြစ်ပျက်နေတာမြင်ပြီး ..
” သားငယ် နင် မိုက်ရိုင်းလှချည်လား .. ယုတ်မာလှချည်လား ”
ငိုသံပါကြီးနဲ့ အံကျိတ်ပီး လှမ်းအော်လိုက်တယ် .. ။ သူ့အမေမြင်တော့ သားငယ်က ဘာလုပ်ရမှန်းမသိကြောင်အပြီး ရပ်ကြည့်နေတယ် .. ကျနော့် အမေကလဲ ဇာတ်တိုက်ထားသလို အန်တီဥမ္မာဆီ ပြေးဖက်ပီးငိုတယ် .. ။ ကျနော်လဲ ခပ်မြန်မြန်ပဲ သားငယ် လက်တွေကို အသင့်ရှိတဲ့ကြိုးတွေနဲ့ တုတ်ပြီး ကုတင်တိုင်တွေမှာ ခြေရောလက်ရော ချည်ပစ်လိုက်တယ် .. ။ အန်တီဥမ္မာက ဒေါသတွေအရမ်းထွက် .. ကျနော်ကလဲ ဒေါသထွက် ဟန်ဆောင်ပီး ဖုန်းထဲက ပုံတွေ ထုတ်ပြလိုက်တယ် .. ။
” ကျနော် မကျေနပ်ဘူး အန်တီ .. ရဲစခန်းသွားမယ် အခုသွားမယ် ”
ဆိုတော့ အန်တီဥမ္မာခမျာ ကျနော့်ကို ပြေးဖက်ရှာပြီး ..
” မလုပ်ပါနဲ့ သားရယ် .. အန်တီ တောင်းပန်ပါတယ်နော် .. သားကျေနပ်အောင် ဘယ်လို လုပ်ပေးရမလဲ .. ပိုက်ဆံ .. ပိုက်ဆံယူမလားဟင် သား .. သားဖြစ်ချင်တာ ဖြစ်စေရပါ့မယ် တိုင်တော့ မတိုင်ပါနဲ့နော်သား .. အန်တီ့သားက ငယ်သေးလို့ အမှားလုပ်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါနော် သား ”
အဲဒီအချိန် သားငယ်က သတိဝင်လာပြီး ..
” မဟုတ်ဘူး အမေ .. မဟုတ်ဘူး အဲလိုဖြစ်အောင် သူတို့လုပ်တာ .. သားနဲ့ အန်တီရွှေရည်က ချစ်သူတွေ … အခုကလဲ အန်တီရွှေရည်က အဲလိုဟန်ဆောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ လုပ်တာ ”
” တိတ်စမ်း .. သားငယ် အမေ မင်းအသံမကြားချင်ဘူး ”
” အန်တီက ကျနော်လုပ်ခိုင်းတာ တကယ်လုပ်မှာလား .. ဒါဆို အပြင်ခနထွက်ခဲ့ပါ ”
အန်တီဥမ္မာ လိုက်ထွက်လာတာ တွေ့တော့ သနားတော့ သနားစရာ .. သူ့ခမျာ မျက်ရည်တွေနဲ့ … ။
” ဒီမှာ အန်တီ .. ကျနော့်အမေကို လုပ်တာ မကျေနပ်ဘူး လုံးဝမကျေနပ်ဘူး ”
” သားကျေနပ်အောင် အန်တီ လုပ်ပေးပါ့မယ်နော် .. ဘယ် ဘယ်လို လုပ် .. လုပ်ပေးရမလဲဟင် ”
” ဒါဆို ကျနော့်အမေကို လုပ်သလို သူ့အမေကို ပြန်လုပ်မှ ကျနော် ကျေနပ်မယ် အန်တီ ”
” ဟင် … ဒါ … ဒါတော့ မ မဖြစ် …ဘူးလေ .. အန်တီတို့က သားအမိချင်းကြီး .. ဟို ဟို သားကျော်ကျော် မကျေနပ်ရင် အန်တီ့ကို အဲ အဲလို …. ”
စကားဆက်မပြောတော့ .. အသံတိမ်ဝင်သွားသည် … ။ ကျနော်လဲ …
” မရဘူး .. အန်တီ ဒါဆိုလဲ ရဲစခန်းကိုသာ လိုက်ခဲ့ပါတော့ .. အဲဒီမှာပဲ ဖြေရှင်းတာပေါ့ ”
” အဲ အဲလိုတော့ မ .. မလုပ်ပါနဲ့ သားကျော်ကျော်ရယ် .. အန် အန်တီ မင်းဖြစ်စေချင်သလို လုပ်ပေးပါ့မယ် ”
” ဒါဆို အန်တီအထဲဝင်ခဲ့ပါ ”
ပြောပြီးတော့ ကျနော် အရင်ဝင်ခဲ့လိုက်တယ် .. အန်တီဥမ္မာခမျာ ဆုံးဖြတ်နေဟန်တူတယ် .. တော်တော်ကြာမှ အခန်းထဲ ဝင်လာလေတယ် .. ။ အခန်းထဲရောက်တာနဲ့ သူ့သားကို တောင်းပန်သလို ကြည့်ရင်း သူ့ကြယ်သီးတွေကို တလုံးချင်း ဖြုတ်နေတော့တယ် .. ။ သားငယ်က ဒါကိုမြင်တော့ ..
” အမေ မလုပ်နဲ့အမေ ဘာဖြစ်ဖြစ် သားခံမယ် ဒီလူယုတ်မာ စော်ကားတာမခံနဲ့ အမေ ”
အန်တီဥမ္မာက မကြားသလို အတွင်းခံတွေပါ ချွတ်နေတယ် .. ။ မျက်ရည်တွေလဲ ရွှဲလို့ သားငယ်ကလဲ သူ့အမေကိုကြည့်ပီး မျက်ရည်တွေရွှဲလို့ ..။ ခနနေတော့ အန်တီဥမ္မာ မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း တုံးလုံးဖြစ်သွားတော့တယ် .. ။ ကျနော်နဲ့ အမေလဲ တပြိုင်ထဲ သားငယ်ရှေ့မှာပင် အန်တီဥမ္မာရဲ့ နို့နှစ်လုံးကို နှစ်ယောက်အတူ စို့လိုက်တော့ အန်တီဥမ္မာခမျာ ငိုနေရက်နဲ့ပင် … မျက်စိစုံမှေးလို့ အံကြီးကျိတ်သွားတယ် .. ။
သားငယ်လဲ ဆက်မအော်နိုင်တော့ဘူး .. သူ့အမေကို ကိုယ်တုံးလုံးနဲ့ မြင်လိုက်ရတော့ ညိုးနေတဲ့ သားငယ်ရဲ့ လီးက အစွမ်းကုန် ထောင်မတ်လာတော့တယ် .. ။ ကျနော်တို့ သားအမိလဲ နို့စို့နေတာရပ်ပြီး အန်တီဥမ္မာကို သူ့သားရှေ့တွန်းပို့လိုက်တယ် .. ။ သားငယ်က မျက်စိတွေကို မှတ်ရင်း အမေ မလာနဲ့ မလာနဲ့လို့ အော်နေလေတယ် .. ။
မျက်စိသာ မှိတ်ထားတာ သူ့လီးကတော့ အစွမ်းကုန် ထောင်မတ်လို့ ။ အန်တီဥမ္မာက သူ့သား သားငယ်ရှေ့ ရပ်ပြီး ခပ်တိုးတိုးလေးပြောတယ် …
” သား အမေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါ .. အမေ ဒီလိုမှ မလုပ်ရင် သားဘဝ ရေစုံမျောရတော့မယ် သားရယ် ”
ဆိုပြီးတာနဲ့ သားငယ်လီးကို အန်တီဥမ္မာက လှမ်းကိုင်လိုက်တယ် .. ။ သားငယ်လီးဟာ သူ့အမေလက်ထဲမှာ တဆတ်ဆတ်တုန်လို့ .. ။ ဆယ်ချက် ဆယ့်ငါးချက်ထုပေးလိုက်ရုံနဲ့တင် သားငယ် မခံနိုင်တော့ဘူး .. ။
” အ .. အ .. အမေ့ အားးးး ”
အော်သံနဲ့အတူ သားငယ်လီးဆီက လရည်တွေပန်းထွက်လာတော့တယ် .. ။ အန်တီဥမ္မာက သက်ပြင်းတစ်ချက်ချရင်း ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ ကျနော်တို့သားအမိဘက် လှည့်လာတယ် ..
” ဒီလောက်ဆို ရပြီလားဟင် .. ကျော်ကျော် ”
” ဘယ်ရမလဲဗျာ.. အခု ကျနော်အလှည့်လေ အန်တီရဲ့ ”
” အို .. မင်းအစကပြောတော့ သားငယ်ကိုပဲ လုပ်ပေးရမယ်ဆို ”
” အန်တီ့သားက ခနနဲ့ ပြီးသွားတော့ ကျနော် အစားဝင်ပေးရမှာပေါ့ .. ကဲဗျာ ကြာတယ် လာ ကျနော့်ဆီ”
ကျနော်လဲ ပြောပြောဆိုဆို အန်တီဥမ္မာကို ခါးကနေဆွဲဖက်ပြီး နှုတ်ခမ်းချင်း ဖိနမ်းပစ်လိုက်တယ် .. ။
” အု အု … နေ နေပါဦး .. မင်းအမေရှေ့မှာ .. မ .. မလုပ်ပါနဲ့ .. ”
” ဟားဟား အမေရေ .. အမေ့ကိုပါ ပါစေချင်လို့တဲ့ အန်တီဥမ္မာက ”
” အို .. အဲလို မပြော ပြော …. ”
စကားဆုံးအောင် မပြောခိုင်းပဲ ကျနော် ဖိနမ်းပစ်လိုက်တယ် .. ။ ကျနော့်အမေကလဲ အဝတ်တွေအကုန်ချွတ်လိုက်ပြီး ကျနော့်လီးကို လာစုပ်ပေးတယ် .. ။ ကျနော်က ကုတင်ပေါ်မှာ ပတ်လက်လှန်နေပြီး ကျနော့်အပေါ်မှာ မိန်းမနှစ်ယောက်က တာဝန်အသီးသီး ယူလို့ပေါ့ .. ။ ခနနေတော့ အန်တီဥမ္မာကို ပတ်လက်လှန်ခိုင်းလိုက်တယ် .. ။ ပီးတော့ ကျနော့်လီးကို အန်တီ့ပါးစပ်ထဲလထည့်လိုက်ရင်း အမေကတော့ အန်တီဥမ္မာ့ အဖုတ်ကြီးကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် ရက်ပေးနေတယ် .. ။
သားငယ်ရှေ့ ဆိုတာတောင် အန်တီဥမ္မာ ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး .. တကိုယ်လုံး တွန့်လိမ်နေပြီး ညီးသံ တအင်းအင်း နဲ့ အော်နေလေတယ် .. ။ ကုတင်တိုင်မှာ ကြိုးတွေ တုပ်ခံထားရတဲ့ သားငယ်ကတော့ သူ့အမေကို ကြည့်ရင်း အံကျိတ်လို့ သူ့လီးက ဒုတိယအကြိမ် ထောင်မတ်လာပြန်တယ် .. ။
” အန်တီ .. အန်တီ လီးစုပ်တာ အရမ်းကျွမ်းတာပဲဗျာ .. ဘယ်နှစ်ချောင်းလောက်ကို စုပ်ပေးဖူးတာလဲ”
” အို .. ကျော်ကျော် အန်တီ့သားရှေ့မှာ ဘာတွေ မေးနေတာလဲ ”
” ဟင်းဟင်း .. သားငယ်လဲ သိချင်နေရှာမှာပေါ့ အန်တီရဲ့ .. ဖြေစမ်းပါဗျာ .. ကျနော်သိချင်လို့ ”
အန်တီဥမ္မာက သားငယ်ကို လှမ်းကြည့်တယ် .. ။ သားငယ်လဲ သိချင်သလို မျက်လုံးတွေနဲ့ သူ့အမေကိုကြည့်နေတယ် .. ။ ပါးစပ်ကတော့ ဘာမှမပြော .. ။
” အန်တီ ဖြေပါ့မယ်ကွယ် .. နှစ် နှစ်ယောက်ကိုပဲ စုပ် စုပ်ဖူးတာပါ ”
ဖြေပြီးတော့ မျက်လွှာလေးချသွားတယ် .. ။ သားငယ်က အံ့သြလို အသံနဲ့ …
” အဲဒါဘယ်သူလဲ အမေ .. ပြောစမ်းပါဗျာ .. အဲဒါ ဘယ်သူလဲ ဘယ်တုန်းကလဲ ”
” သားရယ် .. အမေ့ကို စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော် .. အမေလေ အမေ မကောင်းတဲ့ မိန်းမပါ .. သားအဖေက အလုပ်မှာပဲ နေ့ရော ညရော နေနေတော့ အမေ့ဆန္ဒတွေကို ဖြည့်ဆည်းမပေးဘူး သားရယ် .. အမေ အမေလေ အိမ် .. အိမ်က ကိုမောင်ကြီးနဲ့ မှား .. မှားခဲ့မိတာပါ .. ”
” ကိုမောင်ကြီးဆိုတာ ဘယ်သူလဲ”
” အိမ်က ဒရိုင်ဘာပါ .. တစ်ရက်က အန်တီ့ယောက်ျား အန်တီ့ကို စိတ်ဝင်စားအောင် ညအိပ်အတွင်းခံ လှလှလေးတွေ သွားဝယ်မိပါတယ် .. အိမ်ရောက်တော့ ကားပေါ်မှာ အဲဒီအထုပ် မေ့ခဲ့လို့ ကိုမောင်ကြီးက တွေ့သွားတယ် .. နောက်နေ့ကျ ဈေးသွားတော့ ကိုမောင်ကြီးက အန်တီဆာနေတာသိပြီး မြူစွယ်တော့တာပါပဲ .. အဲဒီကနေ အန်တီစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ စိတ်အလိုလိုက်ခဲ့မိတာပါကွယ် .. သားလေး မေမေမှားပါတယ် .. မေမေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါနော် ”
ကျနော့်ကို ပြောရင်း သူ့သားဘက်ကိုပါ လှည့်တောင်းပန်တယ် .. ။ သားငယ်ကတော့ စိတ်တွေတိုနေတော့တယ် .. ။
” အမေမကောင်းဘူး .. အဖေနဲ့ တိုင်ပြောမယ် .. အမေ မကောင်းတဲ့ မိန်းမကြီး … ”
အန်တီလဲ ခေါင်းငိုက်စိုက်သွားတယ် .. ။ ကျနော်လဲ အခြေအနေကိုမြင်တော့ မပြောမဆိုနဲ့ အန်တီဥမ္မာကို သူ့သားရှေ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ရောက်အောင် ဆွဲခေါ်လိုက်တယ် .. ။ ပီးတော့ အနောက်ကနေ ကျနော့်လီးကို အဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် .. ။
” အို .. အမေ့ … ကျော်ကျော် မ မလုပ်ပါနဲ့ .. အန် အန်တီ့သားရှေ့ကြီးမှာ မလုပ်ပါနဲ့ကွယ် ”
ကျနော်လဲ မရပ်ပဲ ဆယ့်ငါးချက်လောက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ပေးလိုက်တော့ …
” ကောင်းလိုက်တာကွယ် .. ဆောင့် ဆောင့် အန်တီခံနိုင်တယ် ဆောင့် ”
သားအမိနှစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်းပီး အမေအလိုးခံနေရတာကို သားဖြစ်သူက ရပ်ကြည့်နေရရှာတယ် .. ။ ကြိုးနဲ့ တုပ်ခံထားရတော့ သားငယ်လဲ မလှုပ်နိုင် … ။
” ကျော်ကျော့်လီးကြီးက အရမ်းရှည်တာပဲကွာ .. အားးရှီးး ”
ပြောပြောဆိုဆို သူ့သားကို လှမ်းဖက်လိုက်တယ် .. တခြားသူ လိုးနေတာကို သူ့သားကို ဖက်ပြီးခံနေတာ တော်တော်ကို ဖီးရှိနေတဲ့ပုံပဲ .. ။ ခနနေတော့ အန်တီဥမ္မာက သားငယ်ကို လှမ်းနမ်းလိုက်တယ် .. ။ သားငယ်ကလဲ သူ့အမေကို အားရပါးရပြန်နမ်းလို့ ..။
” အမေ့ကို ခွင့်လွှတ်ပါနော် ”
” ကောင်မကြီး .. ခွင့်မလွှတ်နိုင်ဘူး .. ခင်ဗျား ကျုပ်အမေ မဟုတ်တော့ဘူး ”
” မေမေက သားအမေ မဟုတ်တော့ဘူးလား .. ဒါဆို … ”
ပြောရင်းနဲ့ ကျနော့်ဆီကနေ ရုန်းထွက်ပြီး သူ့သားဆီလျှောက်သွားတယ် .. ပီးတော့ ကြိုးတွေဖြေပေးလိုက်ရင်းး …
” အမေက သူစိမ်းမိန်းမကြီးဆိုရင် အမေ့ကို သားမလိုးချင်ဘူးလားဟင် ”
အဲဒီအချိန်မှာ ကျနော်နဲ့ အမေနဲ့က စလိုးနေကြပြီ ..။ အန်တီဥမ္မာက ကျနော်တို့ကို ကြည့်ရင်းနဲ့ သားငယ်ကို ..
” တွေ့လား သား .. သူ့အမေကို ကျော်ကျော်ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်နေလဲ ဆိုတာ .. အမေ့သားရော အမေ့ကို ဘယ်လို ကျေးဇူးဆပ်မှာလဲ ”
ချက်ချင်းပဲ သားငယ်က အန်တီဥမ္မာကို ကုတင်ပေါ်တွန်းလှဲပြီး သူ့အမေ နို့တွေကို စို့ပစ်တယ် .. ။ ကျနော့်အမေကလဲ ကျနော့်အပေါ်မှာ တက်ခုန်နေရင်း သားငယ်လီးကို လှမ်းကိုင်ပြီး သူ့အမေအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်တာပေါ့ .. ။ ပီးတော့ အမေလဲ စိတ်ပိုထန်သွားတယ်ထင်တယ် .. ။
” အားး သား ကျော်ကျော်ရေ အမေ့ကို နာနာလေးလိုးပေးစမ်းပါ .. ”
အန်တီဥမ္မာကလဲ အားကျမခံ ..
” သားငယ် .. အူးးရှီးး .. အမေက အခုသားရဲ့ ဘာလဲဟင် ”
” အမေက သားရဲ့ အမေပါပဲ အမေရယ် .. အားး ကောင်းလိုက်တာ အမေရာ .. သားကသာ အမေ့ရဲ့လင်ငယ်ပါဗျာ .. ”
” ဒါဆို သား အမေ့ကို အမြဲဒီလို လိုးပေးမှာလား ”
” အင်းပေါ့ .. အားးး ဟင်းးးးး .. အမြဲလိုးမှာပေါ့ အမေရယ် .. ”
” ဟင့် ဟင့် .. သား .. အမေ့နို့တွေကို စို့ပေးပါဦးး .. အ အ ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ သားငယ်လေးရဲ့ .. မေမေ့လင်လေးရဲ့ .. ”
” အမေ့ကို လိုးလို့ကောင်းလွန်းလို့ ဖြေးဖြေး မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ .. ”
သူတို့သားအမိလဲ အတိုင်အဖောက်ညီညီ ကာမဆက်ဆံနေကြတယ် .. ။ သူတို့အသံကြားတိုင်း ကျနော် အမေ့ကို ခပ်ကြမ်းကြမ်း ဆောင့်ဆောင်ပစ်လိုက်မိတယ် .. ။
” အားးရှီးး မဥမ္မာ .. ရှင့်ကို ရှင့်သားလိုးတာ ဘယ်လိုနေလဲ”
” အားးဟင့်ဟင့် အရမ်းကောင်းတယ် မရွှေရည်ရယ် .. ကျမ အရမ်းကောင်းတာပဲ ”
” ဒါဆို တို့တွေ သားချင်းလဲပြီး အလိုးခံရအောင်လား”
” အင်း အင်း .. မရွှေရည်သဘောလေ ”
ခနနေတော့ အန်တီဥမ္မာက ကျနော့်အပေါ် တက်လာတယ် .. မြန်တယ် ကျနော့် အမေကတော့ သားငယ်အပေါ်မှာ မြင်းစီးသလို ခုန်နေလေပြီ .. ။ ကျနော်လဲ အန်တီဥမ္မာကို စိတ်ကြိုက် လိုးပစ်လိုက်တော့တယ် ။ အန်တီနဲ့ မေမေက နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်နမ်းရင်း နို့တွေစို့ပေးရင်း အပြိုင် အလိုးခံနေကြတယ် .. ။ တအိမ်လုံးမှာ သားအမိအတွဲနှစ်တွဲရဲ့ ညီးသံတွေ အော်သံတွေဆူညံနေတော့တာပဲလေ .. ။ နောက်ဆုံး ညနေရောက်မှ အကုန်ပင်ပန်းပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ ပတ်လက်လန်သွားကြတော့တယ် .. ။
နောက်နေ့ မနက် အိပ်ရာနိုးတော့ တစ်ဖက်ခန်းက သားငယ်တို့ သားအမိ လိုးနေသံတွေ ကြားလိုက်ရတယ် .. ။ အင်းလေ သူ့အဖေလာမကြိုခင် သားအမိနှစ်ယောက် နူးညံ့တဲ့အချစ်ကို အတူစားသုံးနေကြရှာမှာပေါ့ .. ။ နေ့လည်ရောက်မှ သူ့အဖေကားသံကြားရတော့ သားငယ်တို့ သားအမိလဲ မျက်နှာပိုးသတ်ပြီး ကျနော့်ကို နှုတ်ဆက်တယ် .. ။ ပီးတော့ သားငယ်က ..
” ခနစောင့်ဦး အဖေ အန်တီရွှေရည်ကို သွားနှုတ်ဆက်လိုက်ဦးမယ် ”
” အေးအေး သွား .. အဖေလဲ ကားခန ရေလောင်းလိုက်ဦးမယ် ”
သူ့အဖေ ခွင့်ပြုချက်ရတာနဲ့ သားငယ်က ကျနော့်အမေဆီ မီးဖိုခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားတယ် .. ။ ကျနော်လဲ ရေကန်နေရာပြပြီးတော့ မီးဖိုခန်းထဲ လိုက်ဝင်လိုက်တယ် .. ။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ထမင်းစားပွဲထိုင်ခုံပေါ်မှာ သားငယ်ကအောက်က အမေက အပေါ်ကတက်ခုန်ပြီး လိုးနေကြလေတယ် .. ။ ဘယ်လောက်စိတ်ပါပါနဲ့ အမေတက်ခုန်နေလဲမသိ .. အမေ့နို့ကြီးတွေက သားငယ်ရဲ့ မျက်နှာပေါ်မှာ တဖတ်ဖတ်နဲ့ကို ရိုက်လို့ … ။
” အော် ဒါက နှုတ်ဆက်နေကြတာပေါ့လေ ”
ကျနော်ပြောတော့ သားငယ်က ရယ်တယ် .. ။ အမေက ရှက်သွားပြီး သားငယ်နှုတ်ခမ်းကို ဖိနမ်းပစ်နေတယ် .. ။ သားငယ်က အမေ့ကို အားရအောင် မြန်မြန်လိုးပီးတော့ အမေနဲ့အတူ အပြင်ထွက်လာတယ်။ အန်တီဥမ္မာက ..
” ကျမတို့ သွားတော့မယ်နော် မရွှေရည် .. အတွေ့အကြုံ အသစ်တွေ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. နောက်လဲ မကြာမကြာ လာလည်မယ်နော် .. သား ကျော်ကျော် အန်တီတို့သွားပြီ ”
နှုတ်ဆက်ပြီး ကားပေါ်တက်သွားတော့ ကျနော် ဧည့်ခန်းထဲမှာပဲ ဆက်ထိုင်နေမိတယ် .. အမေက ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ ဝင်လာပြီး..
” သား မေမေတို့ လုပ်ရပ်က မှန်ရဲ့လားဟင် ”
” မှန်ပါတယ် အမေရယ် .. အန်တီဥမ္မာလဲ သူ့လိုအင်တွေကို သူစိမ်းယောက်ျားဆီမှာ သွားဖြည့်ဆည်းခံစရာမလိုတော့ဘူးလေ ”
” အင်းနော် .. မဥမ္မာ အဆင်ပြေသွားတာပေါ့ ”
ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ် ရက်တွေမှာလဲ ကျနော်တို့နဲ့ အန်တီဥမ္မာတို့ အဆက်အသွယ် မပြတ်ခဲ့ကြပါဘူး .. ။ အန်တီဥမ္မာက သူ့သား သားငယ် အကြိုက်အတိုင်း ဝိတ်လျှော့လို့ အခုဆို အရင်ကထက် ပိုလှနေတယ် .. ။ ကျနော်တို့ ဆီကိုလဲ ၂လ တစ်ခါ ၃လ တစ်ခါလောက် လာလည်ကြတယ် .. ။
တစ်ခုတော့ ကျနော်တို့ကို ဖွင့်မပြောဘူးဗျ .. ဦးမောင်ကြီးကို ဘာလို့ အလုပ်မထုတ်သေးတာလဲဆိုတာ .. ။ ကျနော်တွေးကြည့်မိတယ် .. အန်တီဥမ္မာတယောက်ထဲ ဒီယောက်ျားသုံးယောက်နဲ့တနေ့တနေ့ အလုပ်တောင် လုပ်နိုင်ပါဦးမလားလို့လေ .. ။ အမေကတခါတလေ လှမ်းစတယ် .. ။
” မဥမ္မာ ဘယ်လင်ကို အချစ်ဆုံးလဲ ”
” တစ်ယောက်တစ်မျိုးနဲ့ အကုန်ချစ်ရတာပေါ့ရှင် ” တဲ့ .. ။ ကြည်နူးနေတဲ့ အန်တီဥမ္မာကိုကြည့်ရင်း ကျနော်တို့သားအမိလဲ ကျေနပ်ရတယ် … ။ ဒီလိုနဲ့ ကျနော်တို့ မိသားနှစ်စုက အမြဲချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ဘာမဆိုတိုင်ပင်ဖော် တိုင်ပင်ဘက်တွေ ဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဗျာ ……….. ။
ဖတ်ရှုကြိမ် စုစုပေါင်း : 28,224
← အချစ်ကြောင့် ပူဆွေးနေရတယ်